HVAC - Heating Ventilation & Air Conditioning [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > အင်ဂျင်နီယာနယ်ပယ် > စက်မှုအင်ဂျင်နီယာများ > စက်မှုအင်ဂျင်နီယာပညာ > HVAC - Heating Ventilation & Air Conditioning
View Full Version : HVAC - Heating Ventilation & Air Conditioning
Can someone post and discuss about HVAC systems? Basic theories, practices and so forth.
ဒီ topic လေးကို စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ အောက်ကိုပြောင်းလိုက်ပါတယ်...
Heating, ventilating, and air conditioning is based on the basic principles of thermodynamics, fluid mechanics, and heat transfer ဆိုတာလေးကိုတွေ့ လို့ ပါပဲ...
thermodynamics, fluid mechanics, and heat transfer တွေဟာ
စက်မှုအင်ဂျင်နီယာရဲ့ Coursework တွေဖြစ်နေလို့ ပါ...
ကျွန်တော်က Chlid Board ကို အဓိက (၂)မျိူးပဲထားချင်ပါတယ်....စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ (Mechanical) နဲ့စက်မှုနှင့်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ(Mechatronics) ဆိုပြီး...အဲဒီအတွက် topic ကိုပြောင်းလိုက်ပါတယ်...
n0x အဆင်ပြေမယ်လို့ ယူဆပါတယ်....
HVAC System တွင်အသုံးပြုသော Terms များ၏ definition အနည်းငယ်ကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
Door provided in an air-handling plant, duct or plenum to permit inspection of the interior.
A device designed for the purpose of removing air-borne impurities such as dusts, gases, vapours, fumes and smokes. Air cleaners include air washers, air filters, electrostatic precipitators and charcoal filters.
The Process of treating air so as to control simutaneously its temperature, humidity, cleanliness and distribution to meet the requirements of the conditional space.
A circular, square or rectangular air-distribution outlet, generally located in the ceiling and consisting of deflecting members discharging and planes, and arranged to promote mixing of supply air with room air.
A system for the purpose of providing air inacontrolled manner to specific enclosures by means of one or more air-handling plants, ducts, plenums, air distribution devices and automatic controls.
Air returned from conditioned or refrigerated space.
The quantity of air delivered to each or any space in the system, or the total delivered to all spaces in the system.
The liquid formed by the condensation ofavapour, such as water which is extracted from moist air as it flows across the cooling coil of an air-conditioner.
A vessel or arrangement of pipes or tubings in which vapour is liquefied by removal of heat.
Any device for the regulation ofasystem or component inanormal operation, manual or automatic. If automatic, the implication is that it is responsive to changes of pressure, temperature or other porperty whose magnitude is to be regulated.
Cooling Tower, water:
An enclosed device for the evaporative cooling of water by contact with air.
A passageway made of sheet metal or other suitable materials, used for conveying air.
Duct covering includes materials such as adhesives, insulation, banding, coating(s), film and jacket used to cover the outside ofaduct, fan casing or duct plenum.
A device used to vary the volume of air passing through an air outlet, inlet or duct.
The use of microcomputer to directly perform the control logic for control loops.
That part ofarefrigeration system in which the refrigerant is vaporised to produce refrigeration.
Ari that flows outward throughawall, door, widow, ခရက်, etc.
Any opening through which air is removed fromaspace which is being air-conditioned or ventilated.
A means of egress from the interior of the building to an exterior space which is provided by the use of the following either singly or in combination: exterior door openings, exit staircase, exit ramps or exit passageways but not including access stairs, aisles, corridor doors or corridors.
A louvered or perforated covering for an air passage opening which can be located in the side-wall, ceiling or floor.
The ratio of the mole fraction of water vapour present in moist air to mole fraction of water vapour in saturated air at the same temperature and pressure.
Air that flows inward throughawall, door, window ခရက်, etc.
Acoustical treatment of fan housings, supply ducts and other parts of the system, and equipment for the isolation of vibration, or to reduce transmission of noice.
A meterial havingarelatively high resistance to heat flow and used principally to retard the flow of heat.
The kilowatt (thermal) is the unit of cooling and heating effects. Approximately 4.15 kW (thermal) are required to change the temperature of one kilogram par second of water flow by 1 C at 15 C.
Duct lining includes materials such as adhesives, insulation, coating and film used to line the inside surface ofaduct, fan casing, or duct plenum.
An air compartment connected to one or more distributing ducts.
A grille and demper assembly covering an air opening.
An air suspension (aerosol) of particles, usually but not necessarily solid, often originating inasolid nucleus, formed from combustion or sublimation. Also defined as carbon or soot particles less than 0.1 micron in size which resulted from the incomplete combustion of carbonaceous materials such as coal, oil, tar and tobacco.
A temperature ofagas or mixture of gases indicated by an accurate thermometer after correction for radiation.
An arbitrary index which combines intoasingle value the effect of temperature, humidity and air movement on the sensation of warmth or cold felt by the human body. The numerical value is that of the temperature of still air at 50% relative humidity which induce an identical sensation.
Temperature, mean radiant:
The temperature ofauniform black enclosure in whichasolid body or occupant would exchange the same amount of rediant heat as in the existing non-uniform environment.
Thermodynamic wet-bulb temperature is the temperature at which water (liquid or solid state) by evaporating into air can bring the air to saturation adiabatically at the same tempreature. Wet-bulb temperature (without qualification) is the temperature indicated byawet-bulb psychrometer, constructed amd used according to specification.
A commercial unit of refrigerating effect. It is equal to 3.52 kw (thermal).
A moisture-impervious layer applied to the surfaces enclosingahumid space to prevent moisture travel toapoint where it may condense due to low temperature.
The purpose of supplying or removing air, by natural or mechanical means, to or from any spaces. Such air may or may not have been conditioned.
A space or group of spaces withinabuilding with sufficiently similar cooling requirement.
Acceptable ranges of operative temperature and humidity for people in typical summer (and winter) clothing during primarily sedentary activity.
Project တစ်ခုအတွက်လုပ်ငန်းအကြိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးချက်များ အနေဖြင့် The client, architect နှင့် consulting engineer တို့ သည်
မိမိတို့ ၏ ရှုထောင့် မျိုးစုံမှ air-conditioning and ventilation installation အတွက် သတင်းအချက်အလက်များကို ဖလှယ်ကာဆွေးနွေးကြ
မှာဖြစ်ပါတယ်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော အချက်အလက် တို့ သည် contract တစ်ခုပြုလုပ်ရာတွင် ပါဝင် ဆွေးနွေးရမည့်ပြဌာန်း ချက်များ
(၁) အသုံးပြုမည့် equipment, tools and materials.
(၂) ငြမ်းဆင်ခြင်းနှင့် လှေကားများအတွက် ဖြည့်ဆည်းပေးမှုများ
(၃) စက်များ ၏ foundations များ နှင့် အထိုင်များ အတွက်ပြင်ဆင်မှုများနှင့် ပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်ပေးမှုများ
(၄) အသေမြှပ်နှံထားသော brackets များ စသည် တပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ရမည့် ကိစ္စများအတွက် ကောင်းမွန်စွာဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှု
(၅) Joinery and carpentry ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စများ
(၆) watersupply pipes များ cooling towers ဆီသို့ သွယ်တန်းမှုများနှင့် floor trap (ကြမ်းခင်းရေဆင်းပေါက်) များ ဆိုင်ရာကိစ္စများ
(၇) လျှပ်စစ် ၀ါယာကြိုးသွယ်တန်းမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ
(၈) လုပ်ငန်းလုပ်နေစဉ်အတွင်း ယာယီလျှပ်စစ်သွယ်တန်းမှု ရေရရှိမှု နှင့် ပစ္စည်းသိုလှောင်သိမ်းဆည်းထားရန်နေရာ စသည်ကိစ္စများ
(၉) စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုကာလ(testing and commissioning) အတွက် လောင်စာ ပါဝါ နှင့် ရေ
အပူပေးခြင်းစံနစ်တွင် central နှင့် local ဟူ၍ ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ Cnetral စံနစ်သည် အများအားဖြင့် အေးသောဥတုရာသီရှိသောဒေသ များရှိ
private / public အဆောက်အဦးများအတွက် အသုံးများပါသည်။ လည်းကောင်းစံနစ်တွင် boiler , furnace (မီးဖိုအကြီစား) သို့ မဟုတ်
heat pump အစရှိသည်တို့ ပါရှိသည်။ Air systems များအတွက် ductwork များသော်လည်းကောင်း အပူပေးထားသော အရည်များ စီးဆင်း
ရန်အတွက် piping works များသော်လည်းကောင်း လေထဲသို့ အပူ စီးကူးနိုင်ရန် radiators သော်လည်းကောင်း ပါရှိပါသည်။ Radiators များ
သည် wall mounted type သော်လည်းကောင်း under-floor heat (ကြမ်းခင်းအားအပူပေးသောစံနစ်အတွက်) ကြမ်းခင်းအောက်တွင်မြှပ်နှံ
ထား၍သော်လည်းကောင်း ထားရှိပါသည်။ အားဖြင့်ထုတ်လွှတ်သောလေသည် ductwork များမှတစ်ဆင့် အလိုရှိရာသို့ ပေးပို့ ပါသည်။ ပူအိုက်
သောရာသီတွင် ductwork များသည် air-conditioning အတွက်အသုံးပြုပါသည်။
Ventilating (လေ၀င် လေထွက်)
Ventilating သည် အခန်းအတွင်းရှိလေထုအား ပြင်ပလေထုနှင့်လဲလှယ်ပေးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ ပြုလုပ်ရာတွင် စိုထိုင်းမှု၊
အနံအသက်ဆိုးများ၊ မီးခိုး၊ အပူ၊ ဖုန်များနှင့် လေထုတွင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် bacteria အစရှိသည်တို့ ကိုပါသန့် စင်ပေးပြီးဖြစ်စေပါသည်။
လည်းကောင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် အခန်းတွင်းရှိ လေ၏သန့် စင်မှုအရည်အသွေးကို ထိန်းသိမ်းရာတွင် အရေးအကြီးဆုံး လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်
လည်းဖြစ်ပါသည်။ လည်းကောင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် mechanical/forced type နှင့် natural type ဟူ၍နှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်ပါသည်။
လည်းကောင်းစံနစ်အား indoor air quality (အခန်းအတွင်းရှိလေ၏သန့် စင်မှုအရည်အသွေး)အားထိန်းသိမ်းထားရန်အတွက်အသုံးပြုပါသည်။
ပမာဏလွန်စိုထိုင်းဆ၊ အနံ့ အသက်များ နှင့်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသော အရာတို့ သည် ပြင်ပလေထုနှင့်အခန်းတွင်းလေထုတို့ အားဖလှယ်
ပေးခြင်းဖြင့် လျော့ကျ / ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။ သို့ ရာတွင် စိုထိုင်းဆအလွန်များပြားသောပမာဏရှိသည့် အနေအထားအတွက်မူ ventilation
ပြုလုပ်ရာ၌ စွမ်းအင်မြောက်များစွာအသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။မီးဖိုဆောင်များနှင့် ရေချိုးခန်း/သန့် စင်ခန်းများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အနံ့ အသက်
များနှင့် တစ်ခါတစ်ရံ စိုထိုင်းဆကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် mechanical exhaust ထားရှိပါသည်။
Air Handling Unit (AHU) တစ်ခုအားမြင်တွေ့ ရပုံ
3 - Vibration isolators
6 - Return and fresh air duct
Ventilation Duct တစ်ခုနှင့် outlet vent တစ်ခုအားမြင်တွေ့ ရပုံ
Natural ventilation (သဘာဝအားဖြင့်လေ၀င်လေထွက်ပြုလုပ်ခြင်း )
Fan (သို့ ) mechanical ventilation အားအသုံးမပြုဘဲ အဆောက်အအုံတစ်ခုအားလေ၀င်လေထွက်ရရှိအောင်ပြုလုပ်ခြင်းကိုခေါ်ပါသည်။ အခန်း
ငယ်များနှင့် ဒီဇိုင်းအရ ခွင့်ပြုနိုင်သော အဆောက်အဦးများအတွက် ပြတင်းပေါက်များကိုအသုံးပြုနိုင်သော်လည်း ၊ ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောအခန်းများနှင့်
အဆောက်အဦးများအတွက်မူ (stack effect) stack နိယာမအတိုင်း ပူနွေးသောလေများသည် အထက်သို့ တက်သည့်အတွက် အမြင့်ပိုင်းတွင်ရှိ
လေထွက်ပေါက်များမှ ထွက်စေပြီး ထိုလေတို့နေရာအစားဝင်လာသောလေအေး များသည် အောက်ပိုင်းတွင်ထားရှိသည့်လေ၀င်ပေါက်များမှဝင်
လာစေခြင်း နည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုပါသည်။ သို့ သော်ငြားလည်းပူနွေးသောရာသီများတွင်မူ ဤစံနစ်အားအသုံးပြု၍မရနိုင်သည့်အတွက်အဆင်ပြေ
မည့် air-conditioning system တစ်ခုအား အရံသင့်ထားရှိရပါသည်။
Nowadays, Heat pump is used for HVAC system. But, it costs much. So, in present condition, this system is used especially for the supermarkets and some public places. So, the researchers are trying to get the better performance and cost reduction for this equipments. So, in near future, this equipments are expected to become widespread to use in residential, hotels and offices.(for knowledge)
အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပို့စ်တွေပါပဲဗျာ .... ကျနော် HVAC နဲ့ ဝေးနေတာ တော်တော်ကြာသွားပါပြီ။ အခု ဒီပို့စ်တွေဖတ်ရတော့ ခေါင်းထဲပြန်ရောက်လာပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုငယ်ရေ
ဒါနဲ့ Fire Damper တို့၊ Air change တို့၊ Psychrometry တို့ အစရှိတဲ့ အတွေ့များ၊ အသုံးများတာလေးတွေ (သီအိုရီပိုင်းရော၊ installation ပိုင်းရောပေါ့) ကျန်နေသေးတယ် ထင်ပါတယ်။ အဲဒါလေးတွေလည်း သိရအောင် ဆက်တင် ပေးပါဦးလို့ မေတ္တာရပ်ခံတောင်းဆိုပါရစေ
In designing the HVAC system cooling capacity ofaroom, what I know is there isageneral rule of thumb for the heat generation based on the type of equipment and its capacity in that HVAC room.
For example.. if we calculate the minimum required cooling capacity ofaroom in whichabig power transformer is being put into operation, so we may need to know 1. the size of room, 2. KW (KVA) of the transformer, 3. heat generation of the transformer per KW etc... in this case heat generation of the transformer per KW can be considered as (X) KJ/KW/sec ..
What I want to know is that the value of X for various kinds of equipment.
Who can explain and give the correct answer ? Thanks
when we design the HVAC. we calculate
1. the solor heat gain ( how window is big, orientation like facing to sun down) design time normally select for myanmar is april , 2:00PM.
2. transmission from adjacent rooms.
3. infiltration (crack method or others you can use)
4. heat generation from occupant. ( human, lighting, machine)
even for florescent light choke, we multifly 1.25 to choke power. so i hope you can apply this for your transformer.
Generally there are sensible heat and latent heat you need to calculate. and findacomfort zone requirement (20 to 24 degree C and 50% RH) point on Psychomatry chart.
for more detail, you better see in an ASHRAE handbook. you can find some parameters for standard building materials and house hold equipment. (see E20 form for calculation )
လေယာဉ်မှာတော့ ATA-21 AIR CONDITIONING &amp; PRESSURIZATION ဆိုပြီး ထားရှိပါတယ်။
AIR CON INLET INTAKE ကနေ ၀င်လာတဲ့ လေကို လေယာဉ်ထဲမှာ ရှိတဲ့ CREW &amp; PASSENGER တွေအတွက်
MAINTAIN လုပ်ပေးရပါတယ်။ ALTITUDE မြင့်လေ PRESSURE &amp; TEMPERATURE ခြားနားမှု DIFFERENTIAL များလေပါပဲ။
AMBIENT AIR ကနေ၀င်လာတဲ့လေကို TEMPERATURE ADJUST (REGULATED) ဖြစ်အောင်
HEAT EXCHANGER &amp; AIR FILTERကနေ သန်.စင်အအေးခံရပါတယ်။
CONDITION AIR TEMPERATURE ကို အောက်ဖေါ်ပြပါ လေရောနှော ခြင်းမှ ရရှိနိူင်ပါတယ်-
(၁) အင်ဂျင် BLEED AIR မှ လေပူများ
(၂) HEAT EXCHANGER မှ လေအေးများ
AIR-CONDITION SYSTEM မှာ AIR-CONDITION PACKS ၊ AIRFLOW REGULATOR ၊ REFRIGERATION
UNIT နှင့် WATER SEPARATOR တို.ပါဝင် ပါတယ်။
PRESSURIZATION SYSTEM ကိုတော့ နောက်မှ ဆွေးနွေးပါ့မယ်ဗျို.။
soe hlaing Myint
we are very thankful for the all. We should share each other but I am also beginner and I am also reader, thanks for all.
soe hlaing myint [/font]ကျေးဇူး ပါဘဲဗျာ။ အခု ခေတ်ကြီးထဲမှာ ဒီ ဟာက အားလုံး အသုံးဝင်လွန်းလို့လေ
AIR CON &amp; PRESSURIZATION တွဲသုံးတယ်ဗျ။ CABIN PRESSURIZATION VENTILATION ပေါ့ဗျာ။
DIFFERENTIAL PRESSURE ကို ADJUST လုပ်ပေးတယ်.........
DIFFERENTIAL PRESSURE ကို 6/7/8 PSI လောက်ထိ ADJUST လုပ်ပေးတယ်.........
AMBIENT AIR ရဲ့ PRESSURE &amp; TEMPERATURE တွေကို CREW &amp; PASSENGER ဒဏ်ခံနိူင်လောက်အောင် RESISTANT မကောင်း ကြဘူး။
AIR SICKNESS ကို လျော့ပေးတာပေါ့ဗျာ.....
နောက် AIRCRAFT ရဲ့ STRUCTURE FAILURE မဖြစ်အောင် ထိန်းပေးတယ်.....
နို.ဆိုရင် GROUND (MEAN SEA LEVEL) နေစတက်တဲ့ PRESSURE &amp; TEMPERATURE က
SURROUNDING PRESSURE &amp; TEMPERATURE နဲ. DIFFERENTIAL တအား များပြီး
STRUCTURE FAILURE ဖြစ်လိမ့်မယ်..........
Dear Ko Nay Win
Based on your discussion, my concern is 4. heat generation from occupant. ( human, lighting, machine)
According to your recommendation, I will explore in some ASHRAE handbooks what I found in this forum.
If I still have some confusion in technicality, I will contact you again.
May I say some HVAC withalittle knowledge. I really like learn &amp; share some of HVAC .
let&#039;s we discuss &amp; learn from here.
Brief History of HVAC
For millennia, people have used fire for heating. Initially, the air required to
keep the fire going ensured adequate ventilation for the occupants. However,
as central furnaces with piped steam or hot water became available for heating,
the need for separate ventilation became apparent. By the late 1880s, rules of
thumb for ventilation design were developed and used in many countries.
In 1851 Dr. John Gorrie was granted U.S. patent 8080 forarefrigeration
machine. By the 1880s, refrigeration became available for industrial purposes.
Initially, the two main uses were freezing meat for transport and making ice.
However, in the early 1900s there wasanew initiative to keep buildings cool
for comfort. Cooling the New York Stock Exchange, in 1902, was one of the
first comfort cooling systems. Comfort cooling was called “air conditioning.”
Our title, “HVAC,” thus captures the development of our industry. The term
“air conditioning” has gradually changed, from meaning just cooling to the
total control of:
• Moisture in the air (humidity)
• Supply of outside air for ventilation
• Filtration of airborne particles
• Air movement in the occupied space.
I wanna discuss apart of HVAC about Mechanical Ventilation ( MV).
Ventilating—the process of exchanging air between the outdoors and the
conditioned space for the purposes of diluting the gaseous contaminants in
the air and improving or maintaining air quality, composition, and freshness.
Ventilation can be achieved either through natural ventilation or mechanical
ventilation. Natural ventilation is driven by natural draft, like when you
openawindow. Mechanical ventilation can be achieved by using fans to
draw air in from outside or by fans that exhaust air from the space to
Air Movement—the process of circulating and mixing air through conditioned
spaces in the building for the purposes of achieving the proper
ventilation and facilitating the thermal energy transfer.
Installation experience with Fire damper installation
We are required to check the completed fire damper installation for compliance with the relevant regulations and good practice.
We always face some common defects (Non-compliance) during installation.
(a)	Flanges embedded in plastering
(b)	Ducts fixed rigidly onto to dampers
(c)	Non combustible material ; not provided
(d)	Wrong type of damper used or fixed incorrectly
(e)	Access doors missing / Access opening missing (ceiling)
(f)	Approved label missing ( such as TVU/PSB sticker in Singapore)
(g)	Gaps round damper not fire stop properly
(h)	Temporary supports not removed
(i)	Damper must sit in the center of the opening.
Sometime, we would likely come across in the fixing of fire dampers.
1)	Access panel are provided on fixed false ceilings for access to dampers for inspection by QP &amp; RI.
2)	Services obstructing the opening of fire damper access doors &amp; ceilings panels, if any, are to be routed away from access doors.
3)	Dampers are not to be painted over by the painting contractor.
4)	Sealing of gaps round damper by Civil Contractor are to be done properly and completely.
5)	A complete listing of all fire dampers used in the project is to be prepared for inspection.
MV systems performing certain specific task (i.e. inafire emergency) do not required fire dampers, but the ducts must be fire rated in accordance to the fire code.
The following isalist of these systems that do not require fire dampers.
1.	Pressurization systems
2.	Smoke purging / control systems
3.	Kitchen exhaust system
4.	Special purpose room (i.e. Fire pumps rooms)
As i know from experience of Chilled Water Air-Condition System (Central Chilled Water Systems).
There are lot of controls &amp; applications system involved.
Just wanna to talk about 1 of system function.
It serves two functions inachilled water system.
An expansion tank providesaplace to add water to the system and allows water to expand without pressure built-up when the temperature of water increases.
Expansion tank should be located above the highest equipment in the chilled water circuit to prevent overflowing of chilled water from the tank.
Is is just about normal expansion of chilled water piping system.
We are working in HVAC fields, we always face problem with Noise problem.
For example, we are studying in library, we always irritating with Air flow noise besides library is silence.
Here is very useful HVAC hand book of how to sizing duct &amp; design.
ကျေးဇူးပြု၍ air-con အကြောင်း ဆွေးနွေးပေးပါ
အဲ့ဒီမှာ ဆွေးနွေးထားပါတယ် ။
အထက်မှာ ဆွေးဆွေးခဲ့သူ Member များကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Air Conditioning &amp; Refrigeration ဘာသာရပ်ကို အနည်းအကျဉ်းတော့ လေ့လာဖူးပါတယ်။ အထက်မှာ ဆွေးဆွေးခဲ့သူ Member များလို၊ Specialized လုပ်ဖူးသူမဟုတ်ပါဘူး။ အကယ်၍ လိုနေတာတွေ၊ မှားနေတာတွေရှိရင် ဖြည့်စွက်ပေးပါ၊ ပြင်ပေးပါခင်ဗျား။
လုပ်ငန်းသဘာရအရ၊ တချိန်က Air Conditioning Plant၊ Refrigeration Plant တွေနဲ့ Refer Container တွေကိုတာဝန်ယူခဲ့ရပါတယ်။ Refer Container တွေကိုလက်ခံတဲ့အခါ၊ မှတ်မိသလောက်ပြောရရင်၊ - 22 Degree C, - 18 Degree C, + 8 Degree C, နဲ့ + 16 Degree C ဆိုပြီး၊ ထည့်သွင်းထားတဲ့ Cargo ရဲ့ Setting Temperature ပေါါမူတည်ပြီး၊ လက်ခံယူပါတယ်။ Plug In လုပ်ပြီး ၅ မီနစ်လောက် မောင်းပြီးတာနဲ့ အားလုံးကို၊ မည်သည့် Temperature မှာရှိသည်ဖြစ်စေ၊ Manual Defrost ON ပစ်ပါတယ်။ နောက်တနေ့မနက်မိုးလင်းရင် မနက် ၉ နာရီမှာ တခါ နဲ့ ညနေ ၅ နာရီမှာ တခါ၊ Manual Defrost နေ့စဉ်လုပ်ပါတယ်။ အဲဒီနည်းနဲ့ တလုံး ၅ ကျပ်ယူကာ လုပ်စားခဲ့တာပါ။ :4: :4: Refer Container ကြောင့် တခါမှ ဒုက္ခပေးခြင်းကိုမခံစားခဲ့ရပါဘူး။
Refrigeration Plant တွေကို ကိုင်တွယ်တဲ့အခါ၊ Vegetable Room က +8 လောက်မို့ ပြသနာမရှိပေမယ့်၊ Fish Room တို့ Meat Room တို့က၊ - 16 တို့၊ - 10 တို့လောက်မှ Maintain မလုပ်နိုင်ရင်၊ ခေါင်းကို ဆောင့်ပါတော့တယ်။ တခါက Meat Room က Compressor လုံးဝမရပ်ပဲတောက်လျှောက်လည်နေပြီး၊ Temperature ကလည်း + 2, +4လောက်ဖြစ်နေတော့ Solenoid တွေများ၊ Choke ဖြစ်လား၊ အနှစ်နှစ်အလလက Compressor LO တွေ၊ System ထဲမှာ ဒုက္ခပေးနေပြီလား၊ စသည်ဖြင့် စဉ်းစားရင်းရှာကြည့်တဲ့အခါ Evaporator Fins တွေမှာ ရေခဲတွေပိတ်ဆို့နေလို့လို့ယူဆပြီး၊ Defrost လုပ်လိုက်မှသာ အဆင်ပြေကာ၊ လိုချင်တဲ့ Setting Temperature ကိုရောက်ပါတော့တယ်။ အဲဒီ Senses နဲ့ Refer Container တွေကိုပါ၊ Manual Defrost လုပ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျား။
Marine Field မှာသုံးတဲ့ Refrigeration Systems For Marine Applications ဆိုတဲ့ မှတ်သားမိသမျှလေးက၊ို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျား။
This article explains the operating principle of refrigeration systems based on vapour compression refrigeration system used on board ships, though these principles are equally applicable across the entire spectra of these equipments.
Food needs to be stored in bulk quantities on board the ship sinceaship may have long voyages. We know thatafresh water generator can be used to convert sea water to fresh water but unfortunately this cannot be said about food. Of course in case of emergencies, you might think of catching fish and eating them but just imagine the case of huge cruise liners and the thousands of passengers on board. Moreover the accommodation spaces need to be maintained at correct temperatures hence the principles of refrigeration are applied for air conditioning and heating purposes. So basically you must have understood the importance of having cold storage spaces on ships which are powered by the refrigeration systems on board.
Refrigeration is the process of removal of heat from objects and/or spaces in order to maintain them at the temperature lower than the ambient. Refrigeration is carried out in two ways namely;
1. Vapor Absorption Refrigeration.
2. Vapor Compression Refrigeration.
Vapor Compression Refrigeration is being universally used for almost all the applications of refrigeration. A gas, also called Refrigerant, is generally used as the medium for heat transfer and, is alternately condensed and evaporated at lower temperatures to remove the heat from the spaces being cooled (refrigerated).
The system consists of four processes namely;
1. Compression of refrigerant gas is carried out inaCompressor, which delivers the gas at higher pressure and temperature.
2. The compressed high temperature gas from the compressor is then condensed to high-pressure liquid at ambient temperature inaCondenser.
3. The high-pressure refrigerant liquid is then passed through an Expansion Valve to reduce its pressure. During the process of expansion while passing through the Expansion Valve, the refrigerant liquid gets cooled due to its expansion, rejecting its heat to itself resulting in evaporation ofasmall part of Refrigerant to vapor. After passing through the Expansion Valve, the Refrigerant consists of mainly low temperature liquid andasmall quantity of vapor both at low pressure.
1.	The liquid Refrigerant containing small quantity of vapor is then passed through the Evaporator coils located in the spaces to be maintained at temperatures lower than the ambient. Here, absorbing heat for its evaporation from the spaces and the objects in the spaces evaporates the Refrigerant gets evaporated.
The low pressure Refrigerant gas leaving the Evaporator coils returns back to Compressor and thus the cycle is repeated again.
1. Storage of food stuffs at low temperatures to prevent them from rotting and increase their shelf life i.e. Domestic Refrigerators, Cold Storage, Refrigerated Containers and Vans for food transportation etc.
2. Air Conditioning of spaces for human comfort i.e. Window Air Conditioners, Central Air Conditioning etc.
3. Industrial Process Cooling.
Main Components of Refrigeration
1.	Compressors: Several types of compressor are in use for different applications and for different refrigerants i.e. Reciprocating compressors and Rotary Compressors like Screw Compressors, Rotating Vane Compressors and Centrifugal Compressors etc.
2.	Condensers: Generally Shell and tube type Condensers are used for all applications. They may be either Air-cooled or Water-cooled.
3.	Expansion Valves: Thermostatic Expansion Valves are used invariably in most of the applications.
4.	Evaporator Coils: They are generally custom-made as per requirements and may be used along with forced draft fans for better heat transfer.
Reference : Introduction to Marine Engineering by D.A Taylor
kyaw zin oo tgo
brother u should enter that link www.airconinstallation.con
Can you share how to do pressure loses, Head loses calculations of Piping and Ducting?
If you wanna design about it you might have some experience in related filed. It will be lead to misunderstanding &amp; confusing in designing.
Herewith attached file of Basic Duct Design course for your further reference.
Also, you may appreciate more details designing in below forum link of the Book, HVAC Duct Design.
တော်တေ်ာလေးတန်ဖိုးရှိတဲ့ရတနာတစ်ခုပါပဲဗျာ ဆက်လက်ပြီးအကိုတို့ရေ အားမနာတမ်းတောင်းဆိုပါရစေ
fan coil unit လေးပါသိပါရစေဗျာ ခုဆိုရင် AHU တို့ chiller တို့အကြောင်းသိလာရပါတယ်
fan and Coil are included in this unit. Act likke an evaporator.
As you know in ACMV system, commonly uses of air handling equipments are AHU and FCU.
AHU နှင့် FCU တိုရဲ့ အလုပ်လုပ်တာကတော quite similiar ပါ...
AHU ကတော ဧရီယာ ကြီးတဲ့နေရာတွေနဲ့ အခန်းတွေ အများကြီး ကို လေပေးတဲ့ အခါမှာ သုံးပါတယ်.
FCU ကတော နေရာ သိပ်ပြီး မပေးတဲ့ ဟိုတယ်ခမ်းလို နဲ့ လူနေအိမ်တွေမှာ အ များ ဆုံး အသုံးပြုပါတယ်.
Hospital &amp; Cool room လို နေရာ မျိုး မှာ တော AHU ကိုပိုပြီး အသုံးများပါတယ် ... AHU က RH အစရှိတွေ့ကို ထိန်းလို
ကျွန်တော်လေ MANDALAY က နန်းတွင်းထဲ ရောက်တော့ အရင်တုန်းက သုံးတဲ့ AIRCON စက်အဟောင်းကြီးကို တွေ.ရတယ်ဗျ။ ( တော်တော်ကို ဟောင်းနေပြီ။ )
သူက POWER CONTROL MACHINE ကို သေသေချာချာလေး လုပ်ပေးရတယ်။
အတွင်းပိုင်းမှာ က ကျောက်စလစ်လေးတွေ ( ရ ) ထပ် ထပ်ထားတယ်။ နောက်ပြီး ပေါ်ကနေ ရေက ဖြတ်စီးနေတယ်။ အားလုံးရဲ. အပေါ်ကမှ COOLING FAN နဲ. မောင်းနှင်ပါတယ်။
DUCT LINE PIPE တွေမှာတော့ WATER SPERATOR တို. စသဖြင့် အဆင့်ဆင့် ထားရှိ ပါတယ်။
သုံးတဲ့ အဆောက်အဦး ကတော်တော်လေးကြီးတယ်။ ဒါပေမယ့် တော်တော်လေး အေးစိမ့်နေတာပဲ။
ခေတ်နောက်ပြန်နေပေ မယ့် သူ.ကို THERMOSTAT သာ တပ်လိုက်ပါက တော်တော်လေး အဆင်ပြေလာမယ်လို. ယူဆမိပါတယ်။
ကျွန်တော်ရဲ. ဆွေးနွေးချက်များ လိုနေတာရှိရင်လဲ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးပေးပါ။ ( အကြံပြုချက်များကို လိုအပ်နေပါတယ်။ )
အဲကွန်း gasလိုင်းကြိးတွေဒီဇိုင်းလုပ်တဲ့အခါ တချို့ ပုံမှာ branch အခွဲတွေကို ဘေးနှစ်ဘက်စီ အညီခွဲပြီး တချို့ကတော့ ဘေးတစ်ခုနဲ့တစ်ခု နဲနဲစီခွာပြီးခွဲံသွားပေးတာတွေ့ရပါတယ် ။ ဘာတွေကွာလို့လဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်။ သိတဲ့ အကိုအမတွေရှိရင်ဖြေပေးပါဦး။ :O
Khine Zaw Linn
Refer to your question about the X factor to calculate the heat radiate from the transformer,
you may need to find out the heat gain from transformer the product specification (catalogue) from the vendor.
if not, you can calculate it from the power factor. let says, power factor for transformer is 0.8, the value of X is 0.2 that means 20% of electrical power convert to heat.
Can you advice me that how much the requirement rates for Lift Ventilation?
How is the advantage of Inverter Aircon System?
Vent openings in lift well
Lift wells shall be adequately ventilated at the top of the shaft to the external air by means of one or more permanent openings havingatotal unobstructed area of at least 1 % of the horizontal section of the well and not less than 0.1 m2 for each lift in the shaft.
ဒါက ပထမ မေးခွန်းရဲ Lift ventilation အတွက်ပါ.. အောက်ကလင့်မှာ Lift နဲဆိုင်တဲ စာအုပ် ရှိပါတယ်
ဒုတိယ မေးခွန်း က ဘာကိုမေးတာလဲ??? :?
The major advantage is less power consumption.
Normal Air-Con compressor is only switch on/off when occupant&#039;s space is warm/cool. Inverter system Air-Con compressor is continuously running depend on occupant&#039;s space cooling load controlled by VFD (Variable Frequency Drive).
www.acmv.org - Air Conditioning and Mechanical Ventilation for Young Burmese Engineer
http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=1 မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
Introduction to Psychrometrics > >
a) Understand the significance of psychrometrics to “air conditioning”
“air conditioning” ဘာသာရပ်၌ Psychrometrics ၏ အရေးပါမူကို နားလည်သဘောပေါက်ရန်။
b) Understand common psychrometric terms including: dry bulb and wet
bulb temperature, relative humidity, specific humidity, dew point,
enthalpy, flow rate, & “standard air”
dry bulb and wet bulb temperature, relative humidity, specific humidity, dew point,
enthalpy, flow rate, & “standard air” စသည့် psychrometric terms များကို နားလည်သဘောပေါက်ရန်။ ထို terms ၏ အဓိပ္ပါယ်ကို နားလည်သဘောပေါက်ရန်။
c) Identify all lines and units of measure on the psychrometric chart
the psychrometric chart ပေါ်၌ သက်ဆိုင်ရာ လိုင်းများ သတ်မှတ်ဆွဲသားနိုင်ရန် နှင့် ယူနစ်များကို ရှင်းလင်းကွဲပြားစွာသိနားလည်နိုင်ရန်။
d) Given any2properties of air, useapsychrometric chart to determine all
other other psychrometric properties
ရရှိနိုင်သော အနည်းဆုံး properties of air ၂ခု မှတဆင့် ကျန်ရှိသည် သက်ဆိုင်ရာ properties of air အားလုံးကို တွက်ချက်၊ရယူနိုင်ရန်
e) Understand the relationship between sensible, latent, and total heat
sensible, latent, and total heat တို့၏ အပြန်အလှန်ဆက်စပ်မူများကို နားလည်သဘောပေါက်ရန်။
f) Understand air mixing and be able to calculate the properties of the air
resulting from the mixture of two airstreams
ရောစပ်နေသော မတူညီသည့် လေနှစ်မျိုးမှဖြစ်ပေါ်လာသည့် air mixing ၏ properties များကို နားလည်သဘောပေါက်ရန်။
g) Use the basic psychrometric equations to calculate sensible, latent, and
sensible, latent, and total cooling/heating load တို့ကို အခြေခံ psychrometric equations သုံး၍ တွက်ချက်နိုင်ရန်။
Human confort zone and Various weather on Psychrometric Chat ( SI unit )
Air con ပညာရပ်ဆိုသည်မှာ လေကို လူတို့တွက် Confortable ဖြစ်မည့် အခြေနေတစ်ခုသို့ရောက်အောင်ပြုလုပ်အတတ်ပညာလည်းဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် လေကို မိမိတို့ လိုအပ်သလို အေးအောင်(သို့) နွေးအောင် ပြုလုပ်အတွက် လေ(air)၏အကြောင်းကို အသေးစိတ်တိတိကျကျနားလည်းရန်လိုအပ်သည်။ Psychrometric Chat ကို နားလည်ခြင်းဖြင့် Air con ပညာရပ်၏ ပြဿနာများကို လွယ်ကူရှင်းလင်းစွာဖြေရှင်နိုင်သည်။ သိုသော် Industires Processes Cooling and Heat အတွက် Psychrometric Chat အသေးစိတ်တိတိကျကျနားလည်းရန်လိုအပ်သည်။
“Standard conditions at SL”
လေ(Dry Air)သည် နေရာဒေသ၊အချိန်၊ရာသီဥတုပေါ်တွင်မူတည်၍ပြောင်းလဲနေတတ်သောကြောင့် သင်ကြားမူများ၊ တွက်ချက်မူများတွင် အများနားလည်လက်ခံသည် စံတစ်ခုသတ်မှတ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်၌ရှိသော လေထုဖိအား 29.921 in. Hg (atmospheric pressure) နှင့် ၇၀ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိသော (70° F) လေကို စံ (“Standard conditions at SL”) အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။
အလွန်ပေါ့ပါးသည် လေသည် သူထက်လေးသည် ရေကို သယ်ဆောင်သွားနိုင်သည်ဆိုပါကယုံကြည်ပါသလား။ လေကရေကိုသယ်ဆောင်သွားနိုင်ကြောင်းအောက်ပါ ဥပမာများဖြင့်သက်သေပြနိုင်ပါသည်။
အလွန်လှပသည့် သက်တန့်နှင့် ပန်းချီဆရာရှုံး လောက်အောင်လှပသည် ရောင်စုံတိမ်တိုက်များသည် လေကရေကိုသယ်ဆောင်ထားသည့်အကောင်းဆုံးဥပမာများဖြစ်ကြသည်။
ထိုကြောင့် လေကို အေးအောင်၊နွေးအောင်လုပ်လိုသည် အခါတိုင်း၌ ထိုလေထဲတွင်ပါဝင်နေသော ရေ၏ ပမာဏကို သိရန်လိုအပ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လေနှင့် ရေငွေ့ မှုန့်ငယ်ကလေးများကို အတူတကွအေးအောင်၊နွေးအောင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
လေထဲတွင်ပါဝင်နေသည့် ရေ၏ပမာဏကို သိရှိရန်အတွက် မိမိတွက်ချက်မည့် လေ၏ properties များကိုသိရှိရမည်။ လေ၏ properties များကိုသိနိုင်ရန်အတွက် psychrometric chart ကို ကျွမ်းကျင်စွာနားလည်သဘောပေါက်ရမည်။
လူသားများ အသက်ရှင်ရန်အတွက်ရူသွင်းနေသည့်လေတွင် နိုက်ထရိုဂျင် ၇၈%၊ အောက်စီဂျင် ၂၁%နှင့် ရေမှုန့်ကလေးများ နှင့် အခြား ဓါတ်ငွေ့ များမှာ ၁%ဖြစ်သည်။
လေထု၏အတွင်းသို့ ရေငွေ့ များရောက်ရှိလာသည်ကို နားလည်နိုင်ရန်အတွက်အောက်ပါဖြစ်စဉ်နှစ်ခုကိုလေ့လာရန်လိုအပ်ပါသည်။
ပှူု၍ပေါ့ပါးနေသည့်လေ(Hot Air ) သည်ရေငွေ့ မှုန့်ငယ်ကလေးများကို စုပ်ယူနိုင်စွမ်းရှိပြီးသည်။ ရေအဖြစ်မှ ရေငွေ့မှုန့်ငယ်ကလေးများအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည့်ဖြစ်စဉ်ကို Evaporation ဟုခေါ်သည်။ ထိုဖြစ်စဉ်သည် ရေ၏အပေါ်ယံမျက်နှာပြင်တွင်ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ ရေကိုဆူအောင်ကျိုချက်သောကြောင့် ရေငွေ့ ပျံခြင်းသည်လည်း Evaporation ဖြစ်စဉ်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။
Evaporation isatype of vaporization ofaliquid, that occurs only on the surface ofaliquid. The other type of vaporization is boiling, that instead occurs on the entire mass of the liquid.
အပူချိန်ကျဆင်းလာ၍ အေးလာသောလေသည် သူ့ ၌သယ်ဆောင်ထားသော ရေငွေ့ မှုန့်ငယ်ကလေးများကို စွန့်ထုပ်ရသည်။ ထိုသို့ ရေငွေ့မှုန့်ငယ်ကလေးများမှ ရေအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားသည့်ကို Condensation ဖြစ်စဉ် (Evaporation ၏ ပြောင်းပြန်ဖြစ်စဉ်) ဟုခေါ်သည်။
Condensation is the change of the physical state of matter from gaseous phase into liquid phase, and is the reverse of evaporation.
Air Con ပညာရပ်၏အခြေခံမှာ ကျွန်ပ်တို့ အနီးရှိ လေကိုအေးအောင်၊နွေးအောင်လုပ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သဘာဝအားဖြင့်ရေသည်လေထက်ပို၍ အပူကိုသိုလှောင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ထို့ ကြောင့် ရေကို အေးအောင်(သို့)နွေးအောင်ပြုလုပ်ရန် အတွက်ပို၍ခက်ခဲသည်။ တနည်းပို၍ Energy များစွာလိုအပ်သည်။
1. Psychrometrics Introduction to Psychrometrics http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=1
2. Psychrometrics The specific heat http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=2
3 .	Psychrometrics Dry Bulb Temperature http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=3
4 .	Psychrometrics Wet Bulb Temperature http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=4 (http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=4)
5 .	Psychrometrics Dew Point Temperature http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=5
6 .	Psychrometrics Humidity Ratio and Relative Humidity http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=6
7. Psychrometrics Enthalpy http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=7
8 .	Psychrometrics Air Properties From Psychrometrics Chart (I) http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=8
9 .	Psychrometrics Air Properties From Psychrometrics Chart (II) http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=9
10. Psychrometrics Air Properties From Psychrometrics Chart (III) http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=10
11 Chiller Plant Room Over view of Chiller Plant Room http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=11
12 Air Side AHU Cooling Coil http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=12
13 Air Side Air-Handling Units များအကြောင်း http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=13
14 SS553:2009 (CP13) Outdoor Air Supply http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=14
15 ASHRAE Pocket Guide Load and Air Flow Estimate http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=15
16 AHU Cooling Coils AHU Cooling Coil Specification http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=16
Myanmarengineer forum ကိုယ်စား ကြိုဆိုပါတယ်
ကျန်နေ သေးတဲ course lecture note တွေကိုလည်း တင်ပေး ပါဦး..
ကိုကောင်း ရဲ လာမဲ January မှာ Peninsula Plaza စမဲ Free ပိုချတဲ ACMV သင်တန်း ကိုလည်း ကြော်ငြာပေးပါဦး..
http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=2 (http://http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=2) မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိအရာဝတ္ထုများ အားလုံးသည် အပူချိန်မြင့်မား(High Temperature) သည့်အခါ အပူ(Heat)ကိုသိုလှောင်သိမ်းဆည်းနိုင်စွမ်းရှိကြသည်။ထိုသို့ အပူ(Heat)ကိုသိုလှော်သိမ်းဆည်းနိုင်စွမ်းကို specific heat ဟုခေါ်သည်။
အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်မှာ: 1 unit ထုထည်ရှိသော အရာဝတ္ထု တစ်ခု ကို ၁ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် (သို) ၁ စင်တီဂရိတ် တက်ရန်အတွက် လိုအပ်သော အပူပမာဏကို specific heat ဟုခေါ်သည်။
The specific heat is the amount of heat per unit mass required to raise the temperature by one degree Celsius (or) one degree F.
ရေ ၁ ပေါင် (1 lb) ကို 1° F မြင့်တက်ရန် (သို့)ကျဆင်းရန်အတွက် လိုအပ်သော စွမ်းအင်(Energy)ပမာဏကို 1 BTU ဟုခေါ်သည်။
The BTU (British Thermal Unit) is the amount of heat required to raise the temperature of one pound of water through 1oF (58.5oF - 59.5oF) at sea level (30 inches of mercury).
ရေ ၁ ကီလိုဂရမ်(1 Kg)ကို 1° C မြင့်တက်ရန် (သို့)ကျဆင်းရန်အတွက် လိုအပ်သော စွမ်းအင်(Energy)ပမာဏကို ၁ ကယ်လိုရီ( 1 Calorie ) ဟုခေါ်သည်။
Calorie (denoted by lowercase c) is the amount of energy required to raise the temperature of one kilogram of water by one degree Celsius.
Specific heat မှာ ၏ အပူကိုသိုလှောင်နိုင်စွမ်းဖြစ်ပြီး။ BTU နှင့် Calorie မှာ Specific heat ၏ Unit ဖြစ်သည်။
ရေ ၁ ပေါင် (1 lb) ကို 1° F မြင့်တက်ရန် အတွက် အပူစွမ်းအင်(Energy)ပမာဏို 1 BTU လိုအပ်ပြီး ခြောက်သွေ့ သော လေ ၁ ပေါင် (1 lb of Dry Air) ကို 1° F မြင့်တက်ရန် အတွက် လိုအပ်သည့် အပူစွမ်းအင်(Energy)ပမာဏမှာ 0.24 BTU ဖြစ်သည်။
၄ဆ ၁ဆ ( 4:1)ကွာသည်။ ထိုကြောင့် ရေသည်လေထက် အပူကိုသိုလှောင်နိုင်စွမ်းအားများသည် (သို့) Specific heat မြင့်သည်ဟုခေါ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့် အခန်းတစ်ခုအတွင်း၌ ရှိသောခြောက်သွေ့ သည်လေ (1 lb of Dry Air) ၏ထုထည်မှာ ၄ ပေါင်ရှိပြီး ထိုလေထဲ၌ ရှိသော ရေငွေ့ မှုန့်ငယ်ကလေးများထုထည်မှာ ၁ ပေါင်ရှိသည်။ ထိုအခန်းတွင်၌ရှိသော လေထုကို 1° F မြင့်တက်ရန် အတွက် အပူပမာဏ 1.96 BTU =(4x 0.24) + (1 x 1)လိုသည်။ ရေငွေ့ မှုန့်ငယ်ကလေးများထုထည်မှာ ၁ ပေါင်ရှိသောကြောင့် 1° F မြင့်တက်ရန် အတွက် အပူပမာဏ 1 BTU လိုသည်။ ရှိသောလေ၏ထုထည်မှာ ၄ ပေါင်ရှိပြီး Specific heat မှာ 0.24 BTU ဖြစ်သောကြောင့် ခြောက်သွေ့ သည်လေ (1 lb of Dry Air)အတွက် 0.96 BTU လိုသည်။
အထက်ပါ ဥပမာ မှတဆင့် အလွန်အသုံးဝင်သော ပုံသေနည်းတစ်ခုကို ရရှိနိုင်သည်။
ခြောက်သွေ့ သောလေ (1 lb of Dry Air) အတွက် လိုအပ်သောအပူပမာဏကို တစ်နည်း တွက်ယူရန်လိုအပ်ပြီး ထို ခြောက်သွေ့ သောလေထဲတွင်ပါဝင်နေသည့် ရေငွေ့ မှုန့်ငယ်ကလေးများ (Water Vapor) အတွက် လိုအပ်သောအပူပမာဏကို နောက်တစ်နည်းဖြင် တွက်ယူရန်လိုအပ်သည်။
ခြောက်သွေ့ သောလေ (1 lb of Dry Air) အတွက် လိုအပ်သောအပူပမာဏကို Sensible Heat ဟုခေါ်ပြီး ထို ခြောက်သွေ့ သောလေထဲတွင်ပါဝင်နေသည့် ရေငွေ့ မှုန့်ငယ်ကလေးများ (Water Vapor) အတွက် လိုအပ်သောအပူပမာဏ ကို Latent Heat ဟုခေါ်သည်။
Sensible Heat (ခြောက်သွေ့ သောလေ (Dry Air) အတွက် လိုအပ်သောအပူပမာဏ )
Latent Heat ရေငွေ့ မှုန့်ငယ်ကလေးများ (Water Vapor) အတွက် လိုအပ်သောအပူပမာဏ
= Total Heat (စုစုပေါင်းလိုအပ်သည့် အပူပမာဏ)
Latent Heat ဆိုသည်မှာ ရေငွေ့ မှုန့်ငယ်ကလေးများ (Water Vapor)ကသိမ်းဆည်းထားသော အပူစွမ်းအင်ဖြစ်သည်။ Latent Heat is the ENERGY stored in Water Vapor.
Sensible Heat ဆိုသည်မှာ ခြောက်သွေ့ သောလေ(Dry Air) ကသိမ်းဆည်းထားသော အပူစွမ်းအင်ဖြစ်သည်။ Sensible Heat is the ENERGY stored in Dry Air.
ခြောက်သွေ့ သောလေ(Dry Air)၏ specific heat သည် အပူချိန်(temperature)ကိုလိုက်၍ပြောင်းလဲနေလေ့ရှိသည်။ The specific heat of dry air (cp)will vary with temperature. သိုသော် တွက်ချက်မူများလွယ်ကူစေရန်အတွက် The specific heat of dry air ၏ တန်ဘိုးကို cp =1.006 kJ/kg C များသောအားဖြင့်အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
cp =1.006 kJ/kg C ၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ ခြောက်သွေ့ သောလေ(Dry Air) ၁ကီလို (1 Kg) ကို ၁ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (1° C) မြင့်တက်ရန်အတွက် 1.006 kJ ကီလိုဂျိုး လိုအပ်သည်။ ၁ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (1° C) အပူချိန် တက်ရန်ဖြစ်စေ (သို့)ကျဆင်းရန်ဖြစ်စေ တူညီသောပမာဏ 1.006 kJ (ကီလိုဂျိုး) လိုအပ်သည်။
လေသည် အပူချိန်ကိုလိုက်၍ ၄င်း၏တန်ဖိုးများမှာ များစွာပြောင်းမူဖြစ်သည်။ ထိုအတူပင် ဖိအားနှင့်ရာသီဥတုကြောင့် လည်း လေ၏တန်ဖိုးများပြောင်းလဲမူဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပြောင်းလဲမူတိုင်းကို လိုက်၍သေးစိတ်တွက်ချက်ရန်အတွက် ရှုပ်ထွေးခက်ခဲသောတွက်ချက်မူများစွာကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ထိုကြောင့် “Psychrometrics Chart” အသုံးပြု၍ရှင်းလင်းလွယ်ကူသောနည်းဖြင့်လိုအပ်သောအဖြေကိုခဏအတွင်းရရှိနိုင်သည်။
“Psychrometrics Chart” ကို Line များစွာဖြင့်ဖွဲ့ စည်းတည်ဆောက်ထားသည်။ ထိုကြောင့် “Psychrometrics Chart” ကို ကျွမ်းကျင်စွာနားလည်နိုင်ရန်အတွက် Line တစ်ခုခြင်းစီ၏ သဘောသဘာဝကို အဓိပ္ပါယ်နှင့်တကွ Physical meaning တို့ကိုပါ သဘောပေါက်အောင်လေ့လာရန်လိုအပ်သည်။
http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=3 (http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=3)မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
သာမိုမီတာဖြင့်တိုင်း၍ရသော လေ၏အပူချိန်ကို Dry Bulb Temperature ဟုခေါ်သည်။ သတင်းစာ၊အင်တာနက်နှင့်မိုးလေဝသဌာနတို့မှဖော်ပြလေ့ရှိသော အပူချိန်မှာ Dry Bulb Temperature ဖြစ်သည်။ Dry Bulb Temperature Line များကို “Psychrometrics Chart” ပေါ်တွင် မျဉ်းမတ်များ (Vertical Line)ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ ထို မျဉ်းမတ်များ(Vertical Line) တလျှောက်လုံးတွင် တူညီသော Dry Bulb Temperature တန်ဖိုးများရှိကြသည်။ Vertical Lines at “Psychrometrics Chart” are constant Dry Bulb Temperature.
Dry Bulb, Wet Bulb နှင့် Dew Point Temperature တို့ ကို အရှင်းလင်းဆုံးဖော်ပြထားသည်
Sling Thermometer သည် Dry Bulb နှင့် Wet Bulb Temperature ကို တိုင်းယူရန် အလွယ်ကူ အရှင်းလင်းဆုံးသော ကိရိယာဖြစ်သည်။
Vertical Lines represent the Dry Blub Temperature on Psychrometrics Chart. အထက်ပါပုံသည် IP ယူနစ်ဖြင့်ရေးဆွဲထားသော Psychrometrics Chart ဖြစ်သည်။
မျဉ်းမတ်များ(Vertical Line) သည် Dry Blub Temperature လိုင်းများဖြစ်သည်။
http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=4 (http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=4) မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
Wet Bulb Temperature ကို ရေစွတ်ထားသည့် ဝါဂွမ်း(သို့)အဝတ်စဖြင့်ပတ်ထားသော သာမိုမီတာဖြင့်တိုင်းယူရသည်။ ရေ စိုစွတ်မူကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော cooling effect သည် Wet Bulb Temperature ကို Dry Bulb Temperature ထက်နိမ့်အောင်ပြုလုပ်သည်။ ထို့ကြောင့် Dry Bulb Temperature သည် Wet Bulb Temperature ထက်မြင့်လေ့ရှိသည်။ လေထုထဲ၌ ရေငွေ့ မှုန့်ငယ်ကလေးများ (Water Vapor) ရာနှုန်းပြည့်ရှိနေလျှင့် (၁၀၀%) Dry Bulb Temperature နှင့် Wet Bulb Temperature မှာတူညီကြသည်။ Dry Bulb Temperature is greater than or equal to Wet Bulb Temperature.
Dry Bulb Temperature > or = Wet Bulb Temperature. ပုံတွင်ပြထားသည့် မျဉ်းစောင်းများသည် တူညီသော Wet Bulb Temperature ကို ဖော်ပြသည်။ Wet Bulb Temperature သည် the temperature of adiabatic saturation. The Wet Bulb temperature is the temperature of adiabatic saturation. The adiabatic evaporation of water from the thermometer and the cooling effect is indicated bya"wet bulb temperature".
The sloping lines indicate equal wet bulb temperatures on Psychrometrics Chart. အထက်ပါပုံသည် IP ယူနစ်ဖြင့်ရေးဆွဲထားသော Psychrometrics Chart ဖြစ်သည်။
မျဉ်းစောင်းများ(The sloping lines) သည် wet Blub Temperature လိုင်းများဖြစ်သည်။wet Blub Temperature ၏ တန်ဘိုးများကို လိုင်း၏ ဘယ်ဘက်ထိပ်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
Dry Bulb Temperature နှင့် Wet Bulb Temperature ခြားနားချက်မှာ လေထု၏စိုထိုင်းစ (humidity of the air ) ကိုပြသည်။ ခြားနားချက်နည်းလျှင် စိုထိုင်းစများ၍ ခြားနားချက်များလျှင် စိုထိုင်းနည်းသည်။ ခြားနားချက်မရှိလျှင် စိုထိုင်းစမှာ ရာနှုန်းပြည့်(၁၀၀%)ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ လေထုထဲ၌ ရေငွေ့ မှုန့်ငယ်ကလေးများ (Water Vapor) များပြားစွာရှိနှင့်ပြီးလျှင် (စိုထိုင်းစများလျှင်) evaporation သိပ်မဖြစ်နိုင်သောကြောင့် cooling effect နည်းကာ Dry Bulb Temperature နှင့် Wet Bulb Temperature တို့ မှာ ကွာခြားမူနည်းသွားသည်။
ဥပမာ မြန်မာနိုင်ငံအညာဒေသ၏နွေရာသီ နေလည်အပူချိန်သည် ၃၇ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (37° C) Dry Bulb Temperature ဖြစ်ပြီး ၃၁ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (31° C) Web Bulb Temperature ဖြစ်သည်။ သို့သော် အီကွေတာရပ်ဝန်းအမေဇုံအမြဲစိမ်းသစ်တော၏နေလည်အပူချိန်သည် ၃၇ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (37° C) Dry Bulb Temperature ဖြစ်ပြီး ၃၃ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (33° C) Web Bulb Temperature ဖြစ်သည်။ Dry Bulb Temperature တို့မှာတူညီကြသော်လည်း Web Bulb Temperature တိုမှာမတူညီကြပေ။ မြန်မာနိုင်ငံအညာဒေသ၏နွေရာသီ သည် ခြောက်သွေ့ ၍ပူအိုက်သော ရာသီဥတုဖြစ်ပြီး အီကွေတာရပ်ဝန်းအမေဇုံအမြဲစိမ်းသစ်တောသည် စိုစွတ်၍ပူအိုက်သော ရာသီဥတုဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့် အမေဇုံအမြဲစိမ်းသစ်တောမှလေထုသည် အညာဒေသမှ လေထုထက် ရေငွေ့ မှုန့်ငယ်ကလေးများ (Water Vapor)ကို ပိုမိုသယ်ဆောင်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အမေဇုံအမြဲစိမ်းသစ်တောမှလေထုကို စိုထိုင်းဆမြင့်( (High Humidity)သည်ဟုသတ်မှတ်ပြီး အညာဒေသမှ လေထုကို စိုထိုင်းဆနိမ့်သည် (Low Humidity)ဟုသတ်မှတ်သည်။ ထိုကြောင့် အမေဇုံတောမှလေထုကိုပူအောင်(သို့)အေးအောင်လုပ်ရန် အညာဒေသမှ လေထုထက်ပို၍ခက်ခဲသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အမေဇုံတောမှလေထုသည် ရေငွေ့ မှုန့်ငယ်ကလေးများ (Water Vapor)ကို ပိုမိုသယ်ဆောင်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=5 (http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=5) မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
The dew-point ဆိုသည်မှာ ရေငွေ့ မှုန့်ငယ်ကလေးများ (Water Vapor) များပြားစွာနှင့် ပြည့်ဝနေသော (ရာနှုန့်ပြည်-့ ၁၀၀%) နေသောလေသည် ထိန်းမထားနိုင်သည့်အဆုံး ထို ရေငွေ့မှုန့်ငယ်ကလေးများမှ ရေအဖြစ်သို့ စတင်ပြောင်းလဲသွားသည့် အပူအချိန်ဖြစ်သည်။
Condensation ဖြစ်စဉ် စတင်သည်အပူချိန် (Temperature) သည် Dew Point Temperature ပင်ဖြစ်သည်။ ထိုအပူချိန်ကို Evaporation ဖြစ်စဉ်၏အဆုံးဟုလည်းခေါ်ဆိုသည်။ သိမ်းဆည်းထားအမျှ ရေမှုန့်များကိုပြန်ထုပ်နေသည့်အချိန်တွင်မည်သည့်ရေမှုန့်ကိုမျှလက်ခံနိုင်စွမ်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
The dew-point is the temperature at which the saturated vapour starts to condense. (start of condensation).
Dry Bulb နှင့် Web Bulb Temperature တို့ တူညီသည့် အခိုက် မှ အပူချိန်ကို Dew Point Temperature ဟုခေါ်ဆိုသည်။ ထိုအခိုက်၌ Dry Bulb, Web Bulb နှင့် Dry Bulb နှင့် Dew Point Temperature တို့အားလုံးမှာတူညီကြသည်။ ထိုအခိုက်၌ Relative Humidity သည် ၁၀၀%ဖြစ်သည်။ Relative Humidity is 100%. Dew Point Temperature ကို ၁၀၀ RH line ပေါ်တွင်တွေ့ ရသည်။
ထိုအခြေနေတွင်ရှိသောလေထုသည် ရေငွေ့ မှုန့်ငယ်ကလေးများ (Water Vapor)ကို အပြည့်အဝ သယ်ဆောင်ထားပြီးပြီဖြစ်သည်။ ထိုအပူချိန်ထက်မြင့်နေသမျှ ရေငွေ့ မှုန့်ငယ်ကလေးများ (Water Vapor)ကို ဆက်လက်သယ်ဆောင်ထားလိမ်မည်။
The Dew Point temperature can be measured by fillingametal can with water and some ice cubes. Stir byathermometer and watch the outside of the can. When the vapor in the air starts to condensate on the outside of the can, the temperature on the thermometer is pretty close to the dew point of the actual air.
The Dew Point temperature ကို တိုင်းရန်အတွက် ဖန်ခွက်တစ်ခုထဲသို့ ရေခဲတုံးလေးများထည့်ပါ။ ဖန်ခွက်နံရံ၌ ရေသီးကလေးများတွေရလျှင့် သာမိုမီတာဖြင့်ဖန်ခွက်နံရံနှင့် အနီးကပ်ဆုံးလေ၏အပူချိန်ကိုတိုင်းလျှင် အနီးစပ်ဆုံး The Dew Point temperature ကို ရမည်။
The Dew Point is given by the saturation line in the psychometric chart.
The Dew Point temperature ဥပမာများ
အရာဝတ္တုတစ်ခုခု ၏အပူချိန်သည် လေ၏ Dew Point temperature ထက်မြင့် (ပူ) နေပါက Condensation မဖြစ်နိုင်ပါ။ There will not be condensation, if Dew Point temperature of Air is higher than Metal Temperature
အရာဝတ္တုတစ်ခုခု ၏အပူချိန်သည် လေ၏ Dew Point temperature ထက်နိမ့် (အေး) နေပါက Condensation ဖြစ်မည်။ There will be condensation, if Dew Point temperature of Air is lower than Metal Temperature
Question: အဆောက်အဦးတစ်ခု အတွင်းမှလေထုသည်adry bulb temperature of 80° F and is at 50 percent relative humidity ဖြစ်လျှင် ထို အဆောက်အဦး၏ နံရံ၌ condensation မဖြစ်ရန် အတွက် ထိုအဆောက်အဦးတစ်ခု၏ နံရံကို မည်သည် အပူချိန်တွင် ထိန်းထားရမည်နည်း။
က) 80°F dry bulb တန်ဘိုးများ မှ 80°F နေရာတွင် မျဉ်းမတ်တစ်ကြောင်းကိုထောင်ပါ။ ထို မျဉ်းမတ်သည် 80°F dry bulb temperature line ဖြစ်သည်။
ခ) ထိုနောက် RH လိုင်းမျဉ်းကွေးများမှ ၅၀% RH လိုင်းကိုရှာပါ။ ထိုလိုင်းသည် the 50 percent relative humidity line ဖြစ်သည်။
ဂ) The 80°F dry bulb temperature line နှင့် the 50 percent relative humidity line တို့၏ဖြတ်သွားသောနေရာတွင် (the intersection Point) ကိုရမည်။
Dry bulb temperature (given) 80°F
Wet bulb temperature 67°F
Dew point temperature 59°F
Condensation ဖြစ်မဖြစ်ကို စစ်ရန် ထိုအဆောက်အဦးအတွင်းမှေ လထု၏ the dew point temperature ကို သိရန်လိုအပ်သည်။ the 80°F dry bulb temperature line နှင့် the 50 percent relative humidity line တို့၏ ဖြတ်မှတ်ကို psychometric chart ပေါ်တွင် ရှာပါ။ ထိုဖြတ်မှတ်မှ ရေပြင်ညီမျဉ်းအတိုင်းဘယ်ဘက်သို့ သွားလျှင် the dew point temperature စကေးပေါ်၌ dew point temperature တန်ဘိုး 59°F ကိုရမည်။ condensation မဖြစ်ရန် အတွက် ထို ထိုအဆောက်အဦး၏နံရံကို 59°F ၏ အထက်တွင် ဖြစ်အောင်ထားရမည်။ တနည်း condensation မဖြစ်ရန် အတွက် dew point temperature ပူ/နွေး အောင်ထားရမည်။
Humidity Ratio and Relative Humidity
http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=6 မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
Humidity Ratio ဆိုသည်မှာ ရေငွေ့ မှုန့်ငယ်ကလေးများ (Water Vapor)၏ အလေးချိန်နှင့် ထို ရေငွေ့ မှုန့်ငယ်ကလေးများမပါသည် ခြောက်သွေ့ သည်လေ၏ အလေးချိန် အချိုးဖြစ်သည်။
mass of water vapor
Humidity Ratio = --------------------------
mass of dry air
Humidity Ratio တန်ဘိုးများလျှင် ရေငွေ့ မှုန့်ငယ်ကလေးများ (Water Vapor)များပြားစွာပါဝင်နေသည်ဟု ဆိုလိုသည်။ Humidity Ratio တန်ဘိုးနည်းလျှင် ရေငွေ့ မှုန့်ငယ်ကလေးများ (Water Vapor)အနည်းငယ်သာ ပါဝင်နေသည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ထိုထက်ပို၍ Humidity Ratio မှမည်သည့် အချက်အလက်အဓိပ္ပါယ်ကို မျှမကောက်ယူနိုင်ပါ။
Relative Humidity indicates how moist the air is.
Relative humidity may be defined as the ratio of the water vapor density (mass per unit volume) to the saturation water vapor density, usually expressed in percent.
(Actual Vapor Density)
Relative Humidity (RH) = -------------------------------------- X 100%
(Saturation Vapor Density)
Relative humidity သည် actual vapor pressure နှင့် the saturation vapor pressure တို့၏ အချိုးလည်းဖြစ်သည်။
အပူချိန်မြင့်သည့် လေသည် ရေငွေ့ မှုန့်ငယ်ကလေးများ (Water Vapor) များကိုသိုလှောင်သိမ်းဆည်းနိုင်စွမ်းပိုမိုများသည်။
20% Relative Humidity (@5PM temperature) ဆိုသည်မှာ တနည်းအားဖြင့် ထိုအခိုက်၌ရှိသော လေထုသည် ၂၀% ရေငွေ့ မှုန့်ငယ်ကလေးများ (Water Vapor) ကို သယ်ဆောင်ထားသည် ဟုဆိုလိုသည်။ Relative to its dry blub temperature.
၈၀% ထပ်၍ မသယ်ဆောင်နိုင်တော့ပါဟုလည်းဆိုလိုသည်။ (လက်ရှိ Temperature ကို ဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်လျှင်)
အထက်ပါ အခြေနေနှစ်ခုလုံးတွင် ရေငွေ့ မှုန့်ငယ်ကလေးများ (Water Vapor) သည် Absolute ပမာဏမှာတူညီကြသော်လည်း Relative Humidity မှာ မတူညီကြပေ။ Relative Humidity သည် လက်ရှိခဏ၏ အပူချိန်ကို (Present temperature) မှီနေသောကြောင့် (Present temperature) ပြောင်းတိုင်း Relative Humidity ၏ % မှလိုက်ပြောင်းနေသည်။
10C အပူချိန်တွင် ရာနုန်းပြည့်(၁၀၀%)
20C အပူချိန်တွင် ၅၂ရာနုန်း
30C အပူချိန်တွင် ၂၈ ရာနုန်း
Relative humidity ဥပမာ လုံသော ပုံး(သို့) ပုလင်း တစ်ခု အတွင်း၌ရှိသည် လေထုထဲတွင် ရေငွေ့ သည် သူ၏အပူချိန်နှင့်လိုက်၍ပြောင်းလဲနေသည်ကို လေ့လာနိုင်သည်။ ထို ပုံး(သို့) ပုလင်း တစ်ခု အတွင်းသို့ ရေငွေ့ များ မဝင်အောင် (သို့)မထွက်အောင်ထိန်းထားနိုင်လျှင် Relative humidity နှင့် Dry Bulb Temperature စပ်ဆက်ပုံကို အောက်ပါအတိုင်းလေ့လာတွေရှိနိုင်သည်။
http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=7 (http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=7)မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
Enthalpy ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ မှာအလွန်များပြားလှသည်။ အတိအကျ အသေးစိတ်ရှင်းပြရန်လည်း ခက်ခဲလှသည်။ ဂျက်အင်ဂျင်၊ ဒုံးပျံအင်ဂျင်တို့၏ တွန်းကန်အားတွက်ချက်ရာမှစ၍ အက်တမ်နှင့် မော်လီကျုးများ ဓါတုဗေဒနည်းဖြင့် ပေါင်းစပ်ခြင်း၊ပြိုကွဲခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည် အပူစွမ်းအင်များတို့၌လည်း Enthalpyကိုအခြေခံ ၍ တွက်ချက်ကြသည်။
Enthalpy ဆိုသည်မှာ thermodynamic system တစ်ခု ၏ စွမ်းအင်စုစုပေါင်း (Total energy) ဖြစ်သည်။ စွမ်းအင်စုစုပေါင်း (Total energy) တွင် I nternal energy လည်းပါဝင်သည်။ Thermodynamic System ဆိုသည်မှာ မိမိလေ့လာမည့် နယ်နမိတ်ကိုကန့်သတ်ထားသည့် အတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်သည်။ မိမိက ဂတ်စ်တာဘိုင် (Gas Turbine) ကိုလေ့လာနေသည်ဆိုလျှင် ဂတ်စ်တာဘိုင်(Gas Turbine)သည် Thermodynamic system တစ်ခုဖြစ်သည်။ မိမိက ရေမော်လီကျုး ၏ Thermodynamic ကိုလေ့လာနေသည်ဆိုလျှင် ရေမော်လီကျုး သည် မိမိ၏ Thermodynamic System တစ်ခုဖြစ်သည်။
Enthalpy isaThermodynamic Potential. Enthalpy ဆိုသည်မှာ Thermodynamic Potential လည်းဖြစ်သည်။Thermodynamic Potential ဆိုသည်မှာ အရာဝတ္တုတစ်ခု ခု သို့ system တစ်ခုခုက သိုလှောင်ထားသည့် အပူစွမ်းအင်ပင်ဖြစ်သည်။
Dry air ၏ သိုလှောင်ထားသည့် အပူစွမ်းအင် (သို) enthalpy ကို sensible heat ဟုခေါ်ပြီး ရေငွေ့ မှုန်ကလေးများ evaporated water (သို့water vapour) သိုလှောင်ထားသည့် အပူစွမ်းအင် (သို) enthalpy ကို latent heat ဟုလည်းသတ်မှတ်သည်။
Enthalpy of the dry air is the sensible heat and the enthalpy of the evaporated water is the latent heat.
မည့်သည် အရည် (various liquids) ကို မဆို အငွေ့ အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန်အတွက်လိုအပ်သောစွမ်းအင်ကို enthalpies of vaporization ဟုသတ်မှတ်သည်။
ရေအဖြစ်မှ ရေနွေးငွေ့ အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်သောစွမ်းအင်သည် enthalpies of vaporization of water ဖြစ်သည်။
မည့်သည် အရည်ပျော်နိုင်သော အစိုင်အခဲ (melting solids) တိုင်းကို အရည်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန်အတွက်လိုအပ်သောစွမ်းအင်ကို enthalpies of fusion ဟုသတ်မှတ်သည်။
ရေခဲအဖြစ်မှ ရေ အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်သောစွမ်းအင်သည် enthalpies of fusion of ice ဖြစ်သည်။
System တစ်ခုအတွင်း ပါဝင်သည့် အပူပမာဏ (heat content) ကို Enthalpy ဟုလည်းခေါ်သည်။ A chemical reaction oraphysical process အတွင်းပြောင်းလဲသွားသည့် အပူပမာဏကို Enthalpy ဟုလည်းခေါ်ပြီး ΔH (သို့) Δh ဖြင့်ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ Enthalpy is the heat content of the system. Inachemical reaction oraphysical process, the change in heat content is indicated by ΔH.
ပုံတွင်ဖော်ပြထားသော လိုင်းများမှာ constant enthalpy လိုင်းများဖြစ်သည်။ constant enthalpy လိုင်းများသည် constant wet-bulb လိုင်းများနှင့် အနီးစပ်ဆုံးတူညီကြသည်။ ထိုကြောင့် လိုင်းတစ်ကြောင်းတည်းကိုပင် scale (enthalpy and wet-bulb) နှစ်မျိုးဖြင့်ဖတ်၍အသုံးပြုကြသည်။ အနည်းငယ်သော အမှား(error) ရှိသော်လည်းမပြောပလောက်ပေ။ wet-bulb ၏တန်ဘိုးများကို ၁၀၀%RH line အနီးတွင်ဖော်ပြထားပြီး enthalpy ၏တန်ဘိုးများကို wet-bulb ၏တန်ဘိုးများ၏ အပေါ်ဘက် ၌ဖော်ပြထား သည်။
Enthalpy ၏ ယူနစ်(Unit) မှာ IP Unit အတွက် BTU/lb ဖြစ်ပြီး SI Unit အတွက် kJ/kg ဖြစ်သည်။
30 C and 65%RH ရှိသော လေ၏ Enthalpy (သိုလှောင်ထားသောအပူစွမ်းအင်) မှာ 75 kJ/kg ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ထိုလေသည်ပင် 25 C သို့အပူချိန်ကျဆင်းသွားပါက Enthalpy (သိုလှောင်ထားသောအပူစွမ်းအင်) မှာ 58 kJ/kg ဖြစ်သည်။ 25 C and 65%RH ရှိသော လေ၏ Enthalpy (သိုလှောင်ထားသောအပူစွမ်းအင်)မှာ 58 kJ/kg ဖြစ်သည်။
တနည်း 30 C and 65%RH လေ 1 Kg ကို 25 C and 65%RH သို့ရောက်ရှိရန် 17 kJ ခန့် ရှိသော အပူစွမ်းအင်ပမာဏကို ဖယ်ထုပ်ဖြစ်ရသည်။
Air Properties From Psychrometrics Chart (I)
http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=8 မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
ဥပမာ-၁ (IP unit)
psychrometric chart ပေါ်တွင် dry-bulb temperature လိုင်းမှ 34°F နေရာတွင် မျဉ်းမတ်( vertical line)တစ်ကြောင်းထောင်ပါ။
RHလိုင်းမျဉ်းကွေးများမှ 70% RH line ကို ရှာ၍ 34°F dry-bulb temperature လိုင်းနှင့်ဖြတ်သောနေရာတွင် ဖြတ်မှတ်(Intersection Point) တစ်ခုရမည်။
34°F Dry Bulb Temperature လိုင်း နှင့် 70% Relative Humidity လိုင်း ၏ ဖြတ်မှတ်(Intersection Point)မှစ၍ Wet Bulb Line များနှင့် ပြိုင်သည့် မျဉ်းပြိုင်တစ်ကြောင်းကို ကို ဆွဲပါ။ Wet Bulb Line လိုင်း၏တန်ဘိုး(Value) ကိုရှာပါ။
Dry Bulb Temperature of 34°F လိုင်းနှင့် Relative Humidity of 70% မှ ရသော Dry Bulb လိုင်း, Wet Bulbလိုင်း, Relative Humidityလိုင်း နှင့် Dew Point လိုင်း များကို Psychrometric Charts ပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
ဥပမာ ၂ (IP unit)
စိုစွတ်သောလေ(Moist air) ၏ dry bulb နှင့် relative humidityတို့မှ 80°F (dry bulb) and 50 percent relative humidity ဖြစ်လျှင် ထိုလေ၏ properties တို့ကိုရှာပါ။ What are the other properties of this air?
က) The 80°F dry bulb temperature line နှင့် the 50 percent relative humidity line တို့၏ဖြစ်မှတ် ကို (the intersection Point) ရှာပါ။
ခ) 80°F dry bulb တန်ဘိုးများ မှ 80°F နေရာတွင် မျဉ်းမတ်တစ်ကြောင်းကိုထောင်ပါ။ ထို မျဉ်းမတ်သည် 80°F dry bulb temperature line ဖြစ်သည်။
ဂ) ထိုနောက် RH လိုင်းမျဉ်းကွေးများမှ ၅၀% RH လိုင်းကိုရှာပါ။ ထိုလိုင်းသည် the 50 percent relative humidity line ဖြစ်သည်။
the 80°F dry bulb temperature line နှင့် the 50 percent relative humidity line တို့၏ဖြတ်သွားသောနေရာတွင် (the intersection Point) ကိုရမည်။
Dry bulb temperature (given) = 80°F
Relative humidity (given) = 50%
Wet bulb temperature = 67°F
Dew point temperature = 59°F
Psychrometrics Chart ကို ယူနစ်နှစ်မျိုးလုံး (SI unit and IP Unit) ကျွမ်းကျင်စွာနားလည်အသုံးပြုတတ်ရန်လိုအပ်သည်။ ယူနစ်နှစ်မျိုးလုံး (SI unit and IP Unit)သည် တတ်ဆင်သည့်နိုင်ငံ နှင့် Consultant ကိုလိုက် ၍ကွဲလွဲကြသည်။
ဥပမာ၃ ၏ ပုံ
Question အဆောက်အဦးတစ်ခု အတွင်းမှလေထုသည် 25° C dry bulb temperature နှင့် 20° C wet bulb ဖြစ်လျှင် ထို လေထု၏ properties တို့ကိုရှာပါ။ (SI ယူနစ်)
က) 25° C dry bulb တန်ဘိုးများ မှ 25° C နေရာတွင် မျဉ်းမတ်တစ်ကြောင်းကိုထောင်ပါ။ ထို မျဉ်းမတ်သည် 25° C dry bulb temperature line ဖြစ်သည်။ အနက်ရောင် Dotted Vertical Line ဖြစ်သည်။
ခ) 20° C wet bulb တန်ဘိုးများ မှ 20° C နေရာတွင် wet bulb မျဉ်းစောင်းအတိုင်းဆင်းပါ။ ထို မျဉ်းစောင်းသည် 20° C wet bulb temperature line ဖြစ်သည်။ အနက်ရောင် Dotted Slopping Line.
ဂ) The 25° C dry bulb temperature line နှင့် the 20° C wet bulb temperature line တို့၏ဖြတ်သွားသောနေရာတွင် (the intersection Point) ကိုရမည်။
ထို intersection Point မှ ကျန်ရှိသော အောက်ပါ properties ကို ဖတ်ယူနိုင်သည်။
Dry bulb temperature (given) = 25°C
Wet bulb temperature (given) = 20°C
Relative humidity = 63%
Enthalpy = 57.5 kJ/kg of dry air
Humidity Ratio by Mass = 12.6 g/kg dry air
Specific Volume of Air = 0.86 meter cube/kg of dry air
Dew point temperature = 17.6°C
Point 1 = 50° C dry bulb temperature နှင့် 32% RH ဖြစ်သည်။
Point2=18° C dry bulb temperature နှင့် 100% RH ဖြစ်သည်။
Point 1 နှင့် Point2တို့၏ Properties of Air တို့ကိုရှာပါ။
Air Properties From Psychometric Chart (II)
Psychometric charts သုံး၍ဖတ်ယူရသည့် ဥပမာဖြစ်ကြသည်။
psychometric charts ပေါ်တွင် အရောင်မတူသောလိုင်းများ(different color lines) သည် မတူညီသော air properties များကို ရည်ညွန်းသည်။
Blue Line = Cooling Process
Yellow Line = EAT Dry Bulb Temperature
Red Line = EAT Wet Bulb Temperature
Green Line = EAT Enthalpy
Black Line = LAT Dry Bulb Temperature
Brown Line = LAT Enthalpy
Grey Line = EAT Humidity Ratio (Same as LAT on sensible cooling)
Purple Line = LAT Humidity Ratio
90°F Dry Bulb, 75°F Wet Bulb, and 2000 cfm of outside air တို့ဖြစ်ကြသည်။ ထို outside air ကို
Dry Bulb = 75°F နှင့် Wet Bulb = 70.5°F design condition သို့ရောက်အောင် Sensible cooling လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
Outside Conditions (EAT):
Entering Air Condition
CFM = 2000
Dry Bulb = 90°F
Wet Bulb = 75°F
Final Conditions (LAT):
Leaving Air Condition
CFM = Same
Dry Bulb = 75°F
Wet Bulb = 70.5°F
က) Design dry bulb temperature ကို အောက်ခြေမျဉ်း (bottom horizontal axis)ပေါ်တွင်ရှာပါ။ ဤ ဥပမာ တွင် design dry bulb temperature မှာ 90°F ဖြစ်ပြီး အဝါရောင်မျဉ်းဖြစ်သည်။
ခ) Design web bulb temperature ကို ဘယ်ဘက်မျဉ်းကွေးနေရာမှ 75°F Wet Bulb အနီရောင်မျဉ်းစောင်းတလျှောက်ဆင်းပါ။
ဂ) အဝါရောင်မျဉ်းမတ်နှင့် အနီရောင်မျဉ်းစောင်းဖြတ်သည့်နေရာသည် 90°F Dry Bulb, 75°F Wet Bulb outside air ၏ point ဖြစ်သည်။ design EAT point ဟုလည်းခေါ်သည်။
ဃ)ထို point ၏ ရေပြင်ညီမျဉ်းအတိုင်းညာဘက်သို့ အညိုရောင်မျဉ်းအတိုင်းသွားလျှင် design humidity ratio ကို ရသည်။ design humidity ratio တန်ဘိုးကို the right vertical axis ပေါ်တွင်ဖတ်နိုင်သည်။ ဤ ဥပမာ design humidity ratio တန်ဘိုးမှာ 0.015 ဖြစ်သည်။
င) ထို the design point ၏ ဘယ်ဘက် အစိမ်းရောင်လိုင်းမှာ EAT enthalpy လိုင်းဖြစ်သည်။ တန်ဘိုးကို မျဉ်းဖြောင့်ပေါ်တွင် ဖတ်ယူရသည်။ ဤ ဥပမာတွင် enthalpy တန်ဘိုးမှာ 38.36 Btu/lb ဖြစ်သည်။
စ) အပြာရောင်လိုင်းသည် The cooling process ဖြစ်သည်။ahorizontal line သည် Sensible cooling ကို ဖော်ပြသည်။ အပြာရောင်လိုင်းသည်ahorizontal line ဖြစ်နေသောကြောင့် Sensible cooling သာရှိပြီး latent cooling မဖြစ်ပေ။
Final Conditions (LAT) Point, Leaving Air Condition Dry Bulb = 75°F နှင့် Wet Bulb = 70.5°F ကို အသုံးပြုပြီး ပထမ EAT point ကဲ့သို့ Locate လုပ်ပါ။
LAT ၏ enthalpy လိုင်းမှာ အညိုရောင်လိုင်း (brown line) ဖြစ်ပြီး တန်ဘိုးမှာ 26.41 Btu/lb
LAT ၏ humidity ratio လိုင်းမှာ ပန်းရောင်လိုင်း(purple line) ဖြစ်ပြီး တန်ဘိုးမှာ 0.011ဖြစ်သည်။
Air Properties From Psychometric Chart (III)
Air Con အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်သည် လက်ရှိ လည်ပတ်နေသည့် (run နေသည့်) Fan Coil Unit,FCU (သို့) Air Handling Unit, AHU တစ်လုံး၏ အလုပ်လုပ်ပုံ(Performance) ကောင်းမကောင်း ကျွမ်းကျင်းစွာ စစ်ဆေး နိုင်ရပါမည်။ AHU သို့ FCU အလုပ်လုပ်ပုံ(Performance) ကောင်းမကောင်း စစ်ဆေး ရန်အတွက် Air Side မှ စစ်ဆေးနိုင် သလို Chilled Water Side မှလည်းစစ်ဆေးနိုင်သည်။ Air Side မှ အလုပ်လုပ်ပုံ(Performance) ကောင်းမကောင်း စစ်ဆေးခြင်းသည် DX (Direct Expansion) Unit သို့ Chilled Water Unit, မည်သည့် unit မဆို စစ်ဆေးနိုင်သည်။
ဤဥပမာတွင် Return Air နှင့် On-Coil Condition တို့ တူညီသည်ဟုယူဆထားသည်။ (တနည်း Fresh Air သို့ Outdoor Air ကို ignore လုပ်ထားသည်။) Supply Air နှင့် Off-Coil Condition တို့ တူညီသည်ဟုယူဆထားသည်။
အလုပ်လုပ်ပုံ(Performance) ကောင်းမကောင်း စစ်ဆေးရန်အတွက် အောက်ပါ Data များလိုအပ်ပါသည်။
၁) Return Air ၏ Data ၂ခု အနည်းဆုံးလိုအပ်ပါသည်။ ( Dry bulb Temperature သို့ Web Bulb Temperature သို့ RH)။ Dry bulb Temperature နှင့် Web Bulb Temperature တိုင်းယူရန်အလွယ်ကူဆုံး Data ၂ခု ဖြစ်ပြီး သာမာန် Sling Thermometer ဖြင့် ခဏအတွင်းတိုင်းယူနိုင်သည်။
၂) Supply Air ၏ Data ၂ခု အနည်းဆုံးလိုအပ်ပါသည်။
၃) Air Flow Rate လိုအပ်ပါသည်။ SI ယူနစ်ဖြင့်တွက်မည့် Formula မှာ Liter/ Second ဖြစ်သည်။ IP ယူနစ်ဖြင့်တွက်မည့် Formula မှာ Cubit Feet per minute (CFM) ဖြစ်သည်။
Measured at Fan Coil Unit-
တိုင်းယူ၍ရသော Data များ
On Coil Condition:= Return Air
Temp: 26 / 19 (°C DB/WB)
Read from Psychometric chart
Psychometric chart မှဖတ်ယူ၍ရသော Data များ
Enthalpy (h)= 53.9 kJ/kg
Measured at Fan Coil Unit
Off Coil Condition= Supply Air
Temp: 13 / 12.8 (°C DB/WB)
Enthalpy (h)= 36.1 kJ/kg
From Psychrometric Chart,
On-coil h1 (Point 1) = 53.9 kJ/kg
Off-coil h2 (Point 1) = 36.1 kJ/kg
ပုစ္ဆာကိုမတွက်မှီ Latent Cooling Capacity နှင့် Total Cooling Capacity တိုကို နားလည်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
Sensible Cooling Capacity ခြောက်သွေ့ သောလေ
(Dry Air) ကို အေးအောင်လုပ်အတွက် ဖယ်ထုပ်ရမည့် အပူပမာဏ
Latent Cooling Capacity (ရေငွေ့ မှုန့်ငယ်ကလေးများ (Water Vapor) ကို အေးအောင်လုပ်အတွက် ဖယ်ထုပ်ရမည့် အပူပမာဏ)
= Total Heat Cooling Capacity (စုစုပေါင်း ဖယ်ထုပ်ရမည့် အပူပမာဏ)
Total Cooling (Watts) = Q x 1.2 x ( h1-h2)
Sensible Cooling (Watts) = Q x 1.232 x ( t1-t2)
Latent Cooling (Watts) = Q x 3012 x (w1-w2)
Q = Air Volume Metric Flow (Standard) = L/s
h = enthalpy = kJ/kg
t= Air Temperature (Dry Bulb) = C
w = Humidity Ratio = kg water / kg dry air
ပုံတွင်ပြထားသည့် အတိုင်း Before Point (Point 1) သည် Entering Air ၏ Properties များကို ဆိုလိုသည်။ After Point (Point 2) သည် Leaving Air ၏ Properties များကို ဆိုလိုသည်။
Before Point (Point 1)
Point 1 Enthalpy = h1 (kJ/kg)
Point 1 Dry Bulb Temp = t1 (C)
Point 1 humidity ratio = w1 (kg/kg d.a)
After Point (Point 2)
Point2Enthalpy = h1 (kJ/kg)
Point2Dry Bulb Temp = t1 (C)
Point2humidity ratio = w1 (kg/kg d.a)
18,000 CMH ကို ယူနစ်ပြောင်းလိုပါက
Liter per Sencond = (18,000 CMH x 1,000 ) / 3600 = 5000 L/s
= 5,000 X 1.2 (53.9 – 36.1)
= 106,800 Watts
= 106.8 kW (106.8/3.517= 30.37RT)
Sensible Cooling (Watts)= Q x 1.232 x ( t1-t2)
= 5,000 X 1.2 (26 – 13)
= 80,080 Watts
= 80.1 kW (80.1/3.517= 22.77RT)
Overview of Chiller Plant Room
ခေတ်မှီအဆောက်အဦးအကြီးစားတိုင်းလိုလိုတွင် အများဆုံးတွေရလေ့ရှိသည့် Chiller Plant Room သို့ Chilled Water System တစ်ခုအကြောင်း ကို အတိုချုပ် ရှင်းပြပါမည်။ Chilled Water System တစ်ခုကို Water Cooled Chiller(s) သော်၎င်း Air Cooled Chiller(s) သော်၎င်း တတ်ဆင်လေ့ပါသည်။ Water Cooled Chiller ကို အသုံးပြုပါက Circuit ၃ မျိုးရှိပြီး Air Cooled Chiller ကို အသုံးပြုပါက Circuit ၂ မျိုးရှိပါသည်။ Air cooled (သို့) Water Cooled Chiller အတွင်း၌ရှိသော Refrigerat Circuit ကို Chiller အပိုင်းတွင်သေးစိတ်ရှင်းလင်းတင်ပြပါမည်။
Naming of Circuit
Circuit များအားလုံးတွင် အသွားနှင့်အပြန် (သို့)အဝင်နှင့် အထွက် ရှိသည်။ Supply နှင့် Return ဟုသည့်အခေါ်အဝေါ်မှာပိုအသုံးများသည်။
Chilled Water Circuit တွင် Building (သို့) Load side ကို Reference အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ Chilled Water အထွက် (Leaving Chilled Water) ကှိ Chilled Water Supply (Supply to Building) ဟု သတ်မှတ်ပြီး Chilled Water အဝင် (Entering Chilled Water into chiller) ကို Chilled Water Return (Return From Building) ဟု သတ်မှတ်သည်။
Condenser Water Circuit တွင် Chiller ကို Reference အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ Condenser Water အထွက် (Leaving Chilled Water) ကှိ Condenser Water Return (Return From Chiller) ဟု သတ်မှတ်ပြီး Condenser Water အဝင် (Entering Condenser Water) ကို Condenser Water Supply (Supply to Chiller) ဟု သတ်မှတ်သည်။
Air Side Circuit တွင် Serving ကို Reference အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ Air အထွက် Supply Air ( Supply Air To serving Area) ဟု သတ်မှတ်ပြီး Air ကို Return Air ( Return Air from serving Area) ဟု သတ်မှတ်သည်။
Chilled Water Distribution System (သို့) Chilled Water Circuit
Chilled Water Distribution System (သို့) Chilled Water Circuit တွင် Chilled Water Pump, Chiller နှင့် Air Handling Unit/Fan Coil Unit များပါဝင်သည်။ Chilled Water Pump ကို Chilled Water Return ပိုက်လိုင်းဘက် Chiller အနီးတွင်ထားရမည်။ Chilled Water Pump ကို Chilled Water Supply ပိုက်လိုင်းဘက်တွင် မတတ်ဆင်ရပါ။ တနည်း Chilled Water Pump သည် Chilled Water ကို Chiller အတွင်းသို့တွန်းပို့ရမည်။ ထိုသို့ Chiller အတွင်းသို့ ရေများကို တွန်းပို့ခြင်းဖြင့် Chiller ၏ Evaporator အတွင်း၌ရေများ High pressure ဖြင့် ပြည့်နေသောကြောင့် အပူဖလှယ်မူ(Heat Exchage) ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။
Chilled Water Circuit တွင် AHRI (Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute , ယခင် ARI ဟုခေါ်သည်) ကသတ်မှတ်ထားသော စံ(Standard)မှာ Chilled Water Supply Temperature သည် 6.7C Chilled Water Return Temperature မှာ 12.2C ဖြစ်သည်။ စံ Chilled water ရေလည်ပတ်နှုန်း (Standard Chilled water flow rate ) မှာ 2.4 US Galan per minute(USGPM) တစ်မိနစ်လျှင့် ၂.၄ ဂါလံဖြစ်သည်။ မည့်သည် Chiller အမျိုးအစားဖြစ်ပါစေထို Chilled water ရေလည်ပတ်နှုန်း (Standard Chilled water flow rate )ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာ 500RT (တန်၅၀၀) Chiller တစ်လုံး၏ Standard Chilled water ရေလည်ပတ်နှုန်း (Standard Chilled water flow rate ) မှာ 500RT x 2.4GPM = 1,200GPM ဖြစ်သည်။
Heat သည် Temperature မြင့်သည့်နေရာမှ Temperature နိမ့်သည့်နေရာသို့ စီးဆင်းလေ့ရှိသည်။ ထိုကြောင့် Chilled Water Circuit တွင် Temperature မြင့်သည့် 12.2C Chilled Water Return Temperature မှ Temperature နိမ့်သည့် Refrigerant Circuit သို့စီဆင်းသွားသည်။ တနည်း Refrigerant မှ အပူတွေကို စုပ်ယူသွားသည်ဟုလည်းပြောလေ့ရှိသည်။ 12.2C Chilled Water Return သည် အပူဆုံးရှုံးကာ 6.7C Chilled Water Supply အဖြစ် Chiller အတွင်းမှထွက်သွားသည်။
Chilled Water Circuit ကို Closed Circuit ဟုခေါ်သည်။ Closed Circuit အတွင်းမှ Chilled Water သည် လေထု Atmospheric နှင့် မထိတွေ့ နိုင်ပေ။
Condenser Water Distribution System (သို့) Condenser Water Circuit
Condenser Water Distribution System (သို့) Condenser Water Circuit တွင် Condenser Water Pump, Chiller နှင့် Cooling Tower များပါဝင်သည်။ Condenser Water Pump ကို Condenser Water Supply ပိုက်လိုင်းဘက် Chiller အနီးတွင်ထားရမည်။ Condenser Water Pump ကို Condenser Water Return ပိုက်လိုင်းဘက်တွင် မတတ်ဆင်ရပါ။ တနည်း Condenser Water Pump သည် Condenser Water ကို Chiller အတွင်းသို့တွန်းပို့ရမည်။ ထိုသို့ Chiller အတွင်းသို့ ရေများကို တွန်းပို့ခြင်းဖြင့် Chiller ၏ Condenser အတွင်း၌ရေများ High pressure ဖြင့် ပြည့်နေသောကြောင့် အပူဖလှယ်မူ(Heat Exchage) ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။
Condenser Water Circuit တွင် AHRI (Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute , ယခင် ARI ဟုခေါ်သည်) စံ(Standard)မှာ Condenser Water Supply Temperature သည် outdoor air ၏ အပူချိန် (web bulb temperature) ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ များသောအားဖြင့် web bulb temperature ထက် ၁ဒီဂရီ သို့ ၁.၅ဒီဂရီမြင့်လေ့ရှိသည်။ Condenser Water Supply Temperature သည် web bulb temperature ထက်မည်သည့်အခါမျှ မနိမ့်နိုင်ပါ။ Standr Condenser Water Return Temperature သည် 35C ဖြစ်သည်။။ စံ Condenser water ရေလည်ပတ်နှုန်း (Standard Condenser water flow rate ) မှာ 3.0 US Galan per minute(USGPM) တစ်မိနစ်လျှင့် ၃.၀ ဂါလံဖြစ်သည်။ မည့်သည် Chiller အမျိုးအစားဖြစ်ပါစေထို Condenser water ရေလည်ပတ်နှုန်း (Standard Condenser water flow rate )ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ဥပမာ 500RT (တန်၅၀၀) Chiller တစ်လုံး၏ Standard Condenser water ရေလည်ပတ်နှုန်း (Standard Condenser water flow rate ) မှာ 500RT x 3.0GPM = 1,500GPM ဖြစ်သည်။
Heat သည် Temperature မြင့်သည့်နေရာမှ Temperature နိမ့်သည့်နေရာသို့ စီးဆင်းလေ့ရှိသည်။ ထိုကြောင့် Condenser Water Circuit တွင် Heat သည် Temperature မြင့်သည့် Refrigerant Circuit မှ Temperature နိမ့်သည့် Condenser Water Supply Temperature သို့စီဆင်းသွားသည်။ တနည်း Condenser Water Supply မှ အပူတွေကို စုပ်ယူသွားသည်ဟုလည်းပြောလေ့ရှိသည်။ Condenser Water Supply သည် Refrigerant Circuit မှ အပူများကို Carry လုပ်ကာ Condenser Water Return အဖြစ် Chiller အတွင်းမှထွက်သွားသည်။
Condenser Water Circuit ကို Opened Circuit ဟုခေါ်သည်။ Opened Circuit အတွင်းမှ Condenser Water သည် လေထု Atmospheric နှင့် အမြဲထိတွေ့ နေသည်။
Air Distribution System (Circuit)
Air Distribution System (Circuit) တွင် Air Handling Unit မှ Blower သည် Cold Air (Supply Air) ကို Serving Area သို့ ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် Servicing Area မှ Warm Air (Return Air) ကို စုပ်ယူခြင်းအလုပ်ကို ဆောင်ရွက်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် Servicing Area ၏ အပူချိန်(Temperature) မှာ 22 to 24 C ဖြစ်ပြီး Supply Air အပူချိန်(Temperature) မှာ 13 to 15 C ဖြစ်သည်။ Return Air ၏ Temperature မှာ 24 to 26 C ဖြစ်ပြီး outdoor air နှင့် ရောလေ့ရှိသည်။ လေလည်ပတ်နှုန်းမှာ Chilled Water Flow rate နှင့် Condenser Water Flow Rate များကဲ့သို့ ပုံသေမရှိပေ။ အသုံးပြုမူပေါ်မူတည်၍ ပြောင်းလဲသည်။
အချိန်တိုင်း ပုံသေ (Constant) လေလည်ပတ်နှုန်း (Air Flow rate) ဖြင့် မောင်းနေသောAHU ကို Constant Air Volume system (CAV)ဟုခေါ်သည်။ Serving Area ၏ cooling load လိုအပ်ချက်အရ လေလည်ပတ်နှုန်း (Air Flow rate) လိုအပ်သလို မောင်းနေသောAHU ကို Variable-Air-Volume System(VAV)ဟုခေါ်သည်။
Energy Smart Office
http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=17 (http://www.acmv.org/lecture/view.php?id=17) မှကူယူးဖော်ပြသည်။
စင်ကာပူအမျိုးသားတက္ကသိုလ် (National University of Singapore) ၏ Energy Sustainability Unit မှ ရေးသား ပြုစုထားသည့် Office အဆောက်အဦးများအတွက် Energy Smart Office အဆင့်သို့ရောက်ရန် လိုအပ်ချက်များ ဖြစ်သည်။ Energy Smart Office အဆင့်ရရှိပြီးသည့် အဆောက်အဦးများအားလုံးသည် တခြားသော သာမန် Office အဆောက်အဦးများထက် Energy Efficiency နှင့် Thermal comfort, Indoor Air Quality, Lighting quality တို့တွင် ပိုမိုမြင့်မားသည့် အဆင့်တွင်ရှိသည့်ဟုသတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်။
Technical Guide Towards Energy Smart Office မှ Technical data (http://www.e2singapore.gov.sg/docs/TechGuide_ESOffice.pdf)ကို ရှင်းလင်းချက်များနှင့်တကွဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထို Technical Guide များသည် Consultant များ၊ ဒီဇိုင်းနာများနှင့်အဆောက်အဦးပိုင်ရှင်များအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။
Office အဆောက်အဦးတစ်ခုအတွက် Energy Smart Office အဆင့်သို့ရောက်ရန် ပထမဆုံးသောလိုအပ်ချက်မှာ (Gross Floor Area )ဖြစ်သည်။ Office အဆောက်အဦးတစ်ခု၏ Central Air Conditioning ကိုသုံးသည့် ကြမ်းခင်းဧရိယာ မှာ ၁၀၀၀ စတုရန်းမီတာကျော်ရပါမည်။ ၁၀၀၀ စတုရန်းမီတာထက်နည်းသည့် အဆောက်အဦးများကို အငယ်စားအဆောက်အဦးများအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး Energy Smart Office အဆင့်ရရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။ Gross Floor Area ဆိုသည်မှာ အဆောက်အဦးတစ်ခု၏ ပြင်ပ နံရံ များ၏ အတွင်းဘက်မှ ကြမ်းခင်းဧရိယာစုစုပေါင်းကိုဆိုလိုသည်။ ထို ကြမ်းခင်းဧရိယာတွင် လျှောက်လမ်းများ (corridor )၊ စက်ခန်းများ (Mechanical Room) ပါဝင်သည်။ ထို အဆောက်အဦးတစ်ခု၏ ၅၀% ကို ရုံးခန်းများအဖြစ်အသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။ Computer Room, Data Center, Trading Rooms နှင့် Parking Area တို့ကို Secondary Space ဟုခေါ်ဆိုသတ်မှတ်သည်။ Secondary Space သည် ၄၉%ထက်နည်းရမည်။ Computer အကြီးစား(Server) များ နှင့် IT ပစ္စည်းများ ထားသောအခန်းကို Data Center ဟုခေါ်သည်။ Data Center သို High Energy Usage Area သည် ၂%ထက်မပိုရပါ။ (ထိုထက်ပိုများခဲ့လျှင် Correction factor အဖြစ်ထည့်တွက်ရမည်။) ထိုအချက်တို့နှင့်ပြည်စုံမှသာ Energy Smart Office label ကို ရှိနိုင်သော Building အဖြစ်အကျုံးဝင်သည်။
Vacancy rate သည် ၂၀% ထက်မပိုရ။ တနည်း ၈၀%ကျော်ကျော်သည် Occupied Area ဖြစ်ရမည်။ တစ်ပတ်လျှင် နာရီ၅၀ကျော်အလုပ်လုပ်သည့် ရုံခန်းမျိုးဖြစ်ရမည်။ ၁ စတုရန်မီတာ လျှင် ဝန်ထမ်း၃ ယောက် နှန်းဖြစ်သည်။
Energy Smart Office အဆင့်သို့ရောက်ရန် Chiller Plant ၏ Efficiency မှာ 0.75 kW per Refrigeration Ton ထက်နည်းရမည်။ ဥပမာ ထို အဆောက်အဦး၏ Running Cooling Capacity မှာ 500RT ဖြစ်သည့်အချိန်တွင် Chiller Plant သည် 375 kW (Electrical Power) ထက်ပို၍ မသုံးစွဲရပါ။ တနည်း ထို Chiller Plant သည် 500 RT ဖြင့်မောင်းနေချိန်တွင် Chillers, Primary Chilled Water Pump, Secondary Chilled Water Pump, Condenser Water Pump နှင့် Cooling Tower အားလုံးတို့သုံးစွဲနေသည့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်စုစုပေါင်း(Total Electrical Energy Consumption )သည် 375 kWထက်ပို၍မသုံးစွဲရပေ။ (Cooling Capacity 1 Refrigeration Ton ရရန်အတွက် လျှပ်စစ်စွမ်းအား (Electrical Power Input) 0.75kW ထက်ပိုမသုံးရန်ဖြစ်သည်။)
အလင်းရောင်းအတွက် မီးသီများနှင့်မီးချောင်းများ၏စွမ်အင်သုံးစွဲမူကိုလည်းကန့်သတ်ထားသည်။ ရုံခန်းအားလုံးတွင်သုံးစွဲသည့် မီးသီများနှင့်မီးချောင်းများ၏စွမ်းအင်(W) ကို ရုံခန်းကြမ်းခင်းဧရိယာ စတုရန်းမီတာ (Square Meter)ဖြင်းစား (Divided) လျှင် Lighting power density ကိုသည်။ တစ်စတုရန်းမီတာ လျှင် 9.0W ထက်ပို၍ မသုံးစွဲရပါ။
Car Park Fan , Staircase Fan, Toilet Exhaust Fan နှင့် Mechanical Fan များအားလုံးအတွက် စွမ်အင်သုံးစွဲမူကိုလည်းကန့်သတ်ထားသည်။ Mechanical Fan အားလုံး ၏ စွမ်အင်(W) ကို ထို Mechanical Fan သုံးသည့် ကြမ်းခင်းဧရိယာ စတုရန်းမီတာ (Square Meter)ဖြင်းစား (Divided) လျှင် Mechanical Ventilation Density ကိုသည်။ Mechanical Ventilation Density သည် တစ်စတုရန်းမီတာ လျှင် 3.2 W ထက်ပို၍ မသုံးစွဲရပါ။
စွမ်းအင်သုံးစွဲမူကို သတ်မှတ်ထားသလို Thermal Comfort level ကိုလည်းမနိမ့်ကျအောင် သတ်မှတ်ထားသည်။
Dry Bulb Temperature သည် 22.5C ထက်ပိုမအေးရန် နှင့် 25.5C ထက်လည်းပိုမပူရန်သတ်မှတ်ထားသည်။ Relative Humidity ကိုလည်း ၇၀%ထက်မပိုရန်သတ်မှတ်ထားသည်။ Air Movement ကို 0.25m/s ထက်မပိုသတ်မှတ်ထားသည်။ Air Movement သည် 0.25m/s ပိုများလေ Comfort level ကျလေဖြစ်ပြီး စွမ်းများများလည်းပိုလိုအပ်လေဖြစ်သည်။ Mean Radiant Temperature သည် Dry Bulb Temperature ထက် 2C ပိုမမြင့်အောင်ထိန်းထားရမည်။
အလင်းရောင်ရရှိမူကိုလည်း နေ့အချိန်၊ ညအချိန်။ နေရာ၊ လုပ်ကိုင်မည့် အလုပ်အမျိုးအစားကို လိုက်၍ သတ်မှတ်ပေးထားသည်။
ရုံခန်းများအတွက် Fresh Air (သို့) Outdoor Air Supply ၁စတုရန်းမီတာလျှင် 0.65 Liter per Second ထက် မနည်းရန် လိုအပ်သည်။ Reception Area (Lobby and Corridor) အတွက် Fresh Air (သို့) Outdoor Air Supply ၁စတုရန်းမီတာလျှင် 0.25 Liter per Second ထက် မနည်းရန် လိုအပ်သည်။
ရုံခန်းအတွင်းရှိသော လေ၏ သန့်ရှင်းမူ လိုအပ်ချက်များကို လည်းဖော်ပြထားသည်။ ရုံခန်းအတွင်းရှိလူများသည် အောက်စီဂျင်ကိုရှု၍ကာဘွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကို ထုပ်လွှင့်သည်။ လေထုအတွင်းတွင် ကာဘွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ပမာဏများလျှင် ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်နိုင်သည်။ PPM သည် ကာဘွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ပမာဏကို တိုင်းသောယူနစ်ဖြစ်သည်။ 1000ppm ထက်မပိုရပေ။ ကာဘွန်မိုနော့ဆိုဒ်ပမာဏများလျှင် ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်နိုင်သည်။0.1 PPM ထက်မပိုရပေ။ Formaldehyde သည် ကော်ဖြင့်ပြုလုပ်သော ပစ္စည်းများမီးလောင်ကျွမ်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ Exhaust Gases များတွင်လည်း Formaldehyde ပါဝင်သည်။ Suspended Particulate matter သည် ဖုန်မှုန့်များ၊ လေထဲတွင်လွင့်နေသည်အမှုန့်များဖြစ်သည်။ Volatile organic compound နံရံသုတ်ဆေးများ။ ကော်ဇောအသစ်များမှထွက်သော အနံဆိုးဖြစ်သည်။ Bacteria နှင့် Fungi တို့သည် အစားအစာဟောင်းများ။ ပုတ်သိုးသည့်အသီးအရွက်များနှင့်စိုစွတ်သည့်အရာများမှဖြစ်ပေါ်လာသည်။
Table 10 သည် လိုအပ်သော Indoor Air Quality Sample ယူရန် အရေအတွက်ကိုဖော်ပြသောဇယားဖြစ်သည်။
အထက်ပါ Tech Guide Table များသည် South East Asia ဒေသအတွင်းရှိ Office အဆောက်အဦးများအတွက် အသင့်လျှော်ဆုံး Data များဖြစ်သည်။ ထိုData များကို Office အဆောက်အဦးများစွာ ကိုသုတေသနအချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထို Tech Guide Table များအတိုင်း Follow လုပ်နိုင်လျှင် South East Asia ဒေသအတွင်းရှိ အကောင်းဆုံး Office အဆောက်အဦး ၂၅% အတွင်းပါဝင်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
တစ်ခုလောက်ကူညီဖြေပေးကြပါဦးဗျာ။ RGV13100T ဆို တဲ့ အပြင်မှာ သုံးတဲ့ generator ကို ကျွန်တော်က အလျား ၁၂၀၀ mm ၊ အနံ ၆၅၀ mm ၊ အမြင့် ၇၈၅ mm လောက်ရှိ တဲ့boat အလူမီနီယံ compartment ထဲမှာ ထည့်ပြီးမောင်းဖို့အဲ့ အခန်းလေးထဲကို ဘယ်လို ventilation system, exhaust fan တွေ တပ်ရမလဲ။ အဲ့ generator ကလဲ အဲ့လို အခန်းထဲနဲ့အခု လို marine မှာ သုံးဖို့လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူး။ စက်ရဲ့ သက်တမ်းတွေ ဘာတွေက ဘယ်လောက်သုံးရသုံးရ ပြသနာမရှိပေမဲ့။ ဓါတ်ဆီသုံးတာဆို တော့ ပေါက်ကွဲမှု့ မဖြစ်အောင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ။ လို အပ်တဲ့ လောင် ဖို့ လေ နဲ့အေးဖို့ လေ ကို ဘယ်လောက် exhaust fan ကို သုံးရမလဲ။ လေ၀င် ပေါက်တွေကောပေါ့။ ကျေးဇူးပြုပြီး ကူညီပေးကြပါဦးဗျာ။ please reply as soon as possible. URGENT!
http://robinamerica.com/media/manuals/129321473918421250.pdf ဒါက အဲ့ generator ရဲ့ စာအုပ်ပါ။
Hospital Operation Room များ၏ Air Distribution System အကြောင်း
ခွဲစိတ်ခန်းများ၏ Air Distribution System သည် ရုံးခန်းများ နှင့် shopping center များ၏ Air Distribution ထက်ပို၍ အသေးစိတ် တိကျစွာ ဒီဇိုင်း ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ (much more critical and specialized) ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ရုံးခန်းများ အတွက် Air Distribution System ဒီဇိုင်း ပြုလုပ်ရာတွင် Supply air ကို အခန်း အတွင်းသို့ရောက်အောင် ပို့ပေးရုံဖြင့် Supply air နှင့် room air တို့ ရောနှော (Mixed) သွားက အခန်းအတွင်းတွင် uniform temperature zone ဖြစ်ပေါ် လာနိုင်သည်။
ထိုကဲ့သို့ air distribution system မျိုးကို ဆေးရုံ ရှိ ခွဲစိတ်ခန်းများအတွက် အသုံးပြုရန်မသင့်လျှော်ပါ။ လေထဲ တွင်ရှိသော airborne contaminants များသည် အခန်းအတွင်းရှိ နေရာအားလုံးသို့ ပျံ့နှံ့ ရောက်ရှိသွားလိမ့်မည်။ ခွဲစိတ်ခန်း၏ Air Distribution System ဒီဇိုင်းတွင် thermal comfort ကိုသာမက airborne contaminant များကို တိကျစွာထိန်းချုပ်နိုင်ရန်လိုအပ်သည်။ Airborne contaminant များကြောင့် ခွဲစိတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှ ဖြစ်ပေါ်တတ် သည့် ရောဂါများ (post-operative infection) ရရှိနိုင်သည်။ Infection အများစုမှာ လူနာ၏ ခန္ဓာကိုယ်မှသော်လည်း ကောင်း၊ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်များနှင့် သူနာပြုများမှသော်လည်းကောင်း၊ ခွဲစိတ်ခန်းသုံးပစ္စည်းများကြောင့်သော်လည်း ကောင်း ရောဂါကူးစက်ခံရခြင်း ဖြစ်သည်။
ခွဲစိတ်ခန်းအတွင်းသို့ ပြင်ပမှ Particles များမ၀င်ရောက်နိုင်ရန် ventilation system တွင် high efficiency particulate filter (HEPA) များအသုံးပြုထားသည်။ အနီးဝန်းကျင်မှ ပိုးမွှားများနှင့် အမှုန့်အမှိုက်များ ခွဲစိတ်ခန်း အတွင်းသို့မဝင်ရောက်နိုင်ရန် (infiltration မဖြစ်စေရန်) ခွဲစိတ်ခန်းအတွင်းတွင် positive pressure ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားသည်။
Airborne Contaminant ကိုဖြစ်စေသည့် အဓိက အကြောင်း ၂ ခုမှာ
၁) ခွဲစိတ်ခန်းအတွင်းတွင် micro-organism (ဗက်တီးရီးယားများ၊ မှိုများစသည်တို့) ရှိခြင်း နှင့်
၂) ventilation နှင့် infiltration တို့ကြောင့် particles များ ဝင်ရောက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
ခွဲစိတ်ဆရာဝန်များ၊ သူနာပြုများနှင့် လူနာတို့ကြောင့်လည်း Contamination ဖြစ်ပေါ်သည်။ Air Distribution System သည့် Operation Room ၏ မည်သည့် contamination ကိုမဆို ဖယ်ရှား နိုင်စွမ်းရှိရမည်။ System သည် contaminate ဖြစ်သွားသည့်လေများ (Airborne contaminant ပါဝင်နေသည့် လေများ) ကို ကန့်သတ်ခွဲခြားနိုင်ပြီး (isolate လုပ်နိုင်ပြီး) ခွဲစိတ်ခန်းအတွင်းမှ ဖယ်ထုတ်နိုင်စွမ်းရှိရမည်။ ဝင်လာသည့် supply air နှင့် မရောနှောသွားအောင် (Mixing မဖြစ်အောင်) လည်း တားဆီးနိုင်စွမ်း ရှိရမည်။ အကောင်းဆုံးနှင့် အရိုးရှင်းဆုံး နည်းမှာ fresh air ကို များနိုင်သမျှများအောင် ထည့်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
Fresh air ventilation rate များခြင်းကြောင့် cooling load ( latent heat load နှင့် sensible heat load ) များလာလိမ့်မည်။ Airborne Contaminant များကိုထိန်းချုပ်ရန် အတွက်အကောင်းဆုံးသော effective အဖြစ်ဆုံး သောနည်းလမ်း မှာ ခွဲစိတ်ခန်းအတွင်းသို့ Low uniform velocity ဖြင့် supply air ကိုထည့်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ Low uniform velocity သည် stable downward air flow ကိုဖြစ်စေသည်။ Lamina Flow System ဟုလည်း ခေါ်သည်။ Lamina Flow Ventilation System တွင် မျက်နှာကြက် (ceiling) တစ်ခုလုံးကို Lamina Flow Diffuser များဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည်။ ထိုကဲ့သို့ uniform velocity ဖြစ်နေသည့် Lamina Air flow pattern ရရှိရန်အတွက် ပိုများသည့်လေလည်ပတ်မှုနှုန်း (Higher Air Change Rate) ရှိရန်လိုအပ်သည်။ Higher Air Change Rate ကြောင့် Energy သုံးစွဲမှုပိုများလိမ့်မည်။ ထိုကြောင့် Energy Cost သည်လည်း ပိုများလိမ့်မည်။
Energy Consumption သက်သာစေရန်အတွက် Lamina air flow ကိုခွဲစိတ်ခန်းတစ်ခုလုံးအတွက် မပေးပဲ critical zone ဖြစ်သည့် operation table အနီးဝန်းကျင်ကိုသာပေးခြင်းဖြင့် လိုအပ်သော air change rate ကို လျှော့ ချနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ဒီဇိုင်းမျိုးတွင် Lamina flow Diffuser များကို မျက်နှာကြက်တစ်ခုလုံး အပြည့်တပ်ဆင် ရမည့်အစား operation table အပေါ်တည့်တည့်တွင်သာ တပ်ဆင်ထားသည်။ Lamina flow diffuser များမှ လေ သည် low face velocity ဖြင့် ဆင်းလာသော်လည်း diffuser များမရှိသည့် ဘေးဘက်တွင် entrenchment of room air ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ Supply air ၏ အပူချိန်နှင့် အခန်းအတွင်းရှိ လေ၏အပူချိန် ခြားနားချက်တို့ကြောင့် (temperature differential) တို့ကြောင့် supply air သည် discharge air envelop ၏ အလည်သို့ ဦးတည်သွား သည်။ ထို့ကြောင့် Diffuser မှ အကွာအဝေးများလာသည့်အမျှ clean zone (သန့်ရှင်းသောနေရာ) သည် ကျဉ်းမြောင်းသွားသည်။ Lamina flow diffuser များနေရာချသည့် အခါတွင် ဤအချက်ကိုထည့်သွင်း တွက်ချက်ရန် လိုအပ်သည်။
Laminar Flow - Full Ceiling Supply
Laminar Flow - Partial Ceiling Supply
Lamina flow ventilation system မှထွက်လာသည့် supply air များသည် HEPA filter (High Efficiency Particulate Air Filter) များဖြင့်စစ်ပြီးသားဖြစ်သည်။ HEPA filter များသည် Lamina flow ventilation system များတွင် ပါဝင်သည့် အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။ HEPA filter များကို operation အခန်း၏ အပြင်ဘက်နေရာတွင် ထားရှိသောကြောင့် filter လဲခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများပြုလုပ်ရန် အတွက် Sterilized လုပ်ထားသည့် ခွဲစိတ်ခန်း အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ရန်မလိုပေ။ Diffuser များအနီးတွင် တပ်ဆင်ထားသော HEPA filter အမျိုးအစားမျိုးလည်း ရှိသည်။ အလွယ်တကူဖြုတ်နိုင်တပ်နိုင်၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် လွယ်ကူသော်လည်း Sterile လုပ်ထားသည့် ခွဲစိတ်ခန်း အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ပြီးမှသာ ပြုလုပ်၍ ရသည်။
တကယ်အရေးကြီးသောနေရာ (Clean zone) သည် operation table ၏ အနီးပတ်ဝန်းကျင်သာ ဖြစ်သည်။ Full Ceiling Lamina Flow Ventilation System ပြုလုပ်ရမည့်အစား operation table ၏ အနီးကိုသာ Lamina Flow ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပြီး air curtain ဖြင့်ကာရံထားခြင်းဖြင့် energy အတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို လျော့နည်းစေ နိုင်သည်။
Air Curtain ကို Linear slot Diffuser များဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ Operation table ၏ လေးဘက် တွင် air curtain များဖြင့်ကာရံထားသည်။ Linear slot diffuser များကို operating table မှ အနည်းဆုံး ၃ ပေ ခွာ၍တပ်ဆင် ထားရမည်။ ခွဲစိတ်သူများ၊ ခွဲစိတ်ကိရိယာများ clean zone အတွင်းတွင် လုံခြုံစွာ ရွေ့လျှားသွားလာနိုင်ရန်အတွက် ခွဲစိတ်ကုတင်မှ အနည်းဆုံး ၃ ပေ ခွာထားခြင်းဖြစ်သည်။ Linear air diffuser များမှ supply air သည် ဒေါင်လိုက်မျဉ်း (vertical line) မှ ၁၅ ဒီဂရီ ထောင့်ဖြင့်ထွက်လာအောင် ပြုလုပ်ထားရမည်။ ၁၅ ဒီဂရီထောင့်ဖြင့်ထွက်လာသော supply air များသည် operating table နှင့် အနီးဝန်းကျင်အကြားတွင် အဆီးအတား (barrier) ကြားခံတစ်ခု အနေဖြင့် ကာရံပေးထားသည်။
Contaminated room air ကို အပြင်ဘက်ဆုံးနေရာ (outer boundary layer) မှတဆင့်ဆွဲငင်စုပ်ယူသွားပြီး (operating table) မှ အဝေးဆုံးဖြစ်သော exhaust grille များဆီသို့ရောက်သည်။ ထို့ကြောင့် contaminated room air များကို Dilution ဖြစ်စေသည့် နှုန်းပိုမိုမြင့်မားစေသည်။ လျှင်မြန်စွာ Dilution ဖြစ်စေသည်။
An integrated system of laminar flow and linear slot diffusers that minimizes mixing of room and supply air to createacontrolled operating room work area.
Supply air ၏ 65% မှ 75% ပမာဏကို Lamina flow air diffuser မှထုတ်ပေးပြီး ကျန်သည့် 25% မှ 35% ကို Air Curtain မှ discharge လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ခွဲစိတ်ခန်းအတွင်းသို့ ပြင်ပမှ အမှုန့်များ၊ အမှိုက်များ၊ ဗက်တီးရီးယားများ မဝင်ရောက်နိုင်ရန် အခန်းအတွင်းတွင် Positive Pressure ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားရန် လိုအပ် သည်။ ထိုကဲ့သို့ Positive Pressure အနည်းငယ် ဖြစ်ပေါ်နေစေရန် အတွက် supply air volume သည် return air volume ထက် အနည်းငယ်များနေရန် လိုအပ်သည်။ Supply air volume နှင့် return air volume ကွာဟချက် အရမ်းများမနေစေရန်လည်း သတိပြု သင့်သည်။ အကြမ်းအားဖြင့် return air volume သည် supply air volume ၏ 85% ခန့်ဖြစ်သင့်သည်။
Return air grille များကို ကြမ်းခင်းမှ ၃ လက်မ မှ ၆ လက်မ အကြားအကွာတွင် တပ်ဆင် ထားသင့်သည်။ ထိုကဲ့သို့ Exhaust (သို့) return air grille ကို low level တွင်တပ်ဆင်ထာခြင်းကြောင့် contaminated air နှင့် လေထက်လေးသည့် gas များ၊ ဖုန်များ၊ အမှုန့်များကို စုပ်ယူသွားစေနိုင်သည်။ Return air grille ၄ ခု ကို နံရံလေးဘက်စလုံးတွင် တပ်ဆင်ထားရမည်။ နံရံလေးတစ်ဘက်လျှင်တွင် return air grille တစ်ခုကျစီ တပ်ဆင် ထားရမည်။ အကယ်၍ နံရံလေးဘက်စလုံးတွင် return air grille များ တစ်ခုစီ တပ်ဆင်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါက ဆန့်ကျင် ဘက် နံရံ ၂ ဘက်တွင် grille နှစ်ခုစီကို တပ်ဆင်နိုင်သည်။ အနီးကပ်ဆုံး နံရံနှစ်ဘက်တွင် grille နှစ်ခုစီ တပ်ဆင်ရန် အတွက် မသင့်ပါ။ ထိုသို့တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့် contaminated air များ operating table အနီးသို့ ရောက်ရှိသွား နိုင်သည်။
ခွဲစိတ်ခန်းများ၏ မျက်နှာကြက် (ceiling) တည်ဆောက်ပုံသည် air distribution system အတွက် အလွန် အရေးကြီးသည်။ supply air များ pressurization ဖြစ်ရန် အတွက် Ceiling ကို plenum box အဖြစ် တည်ဆောက် ရမည်။ ခွဲစိတ်ခန်းမျက်နှာကြက် တည်ဆောက်ပုံ ၃ မျိုးရှိသည်။
က) Dry wall ceiling
ခ) Gasket T-bar ceiling
ဂ) Combination of Dry wall and T-bar ရောထားသည့် ပုံစံမျိုးတို့ဖြစ်သည်။
ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများ၊ ကုသရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အဦးများ ၏ Air Conditioning System သည် comfort ဖြစ်ရုံသာမက ရောဂါ မပြန့်ပွားအောင် တားဆီးပေးနိုင်ရမည်။ supply air ၏ အပူချိန်ကို အတိုးအလျှော့လုပ်ခြင်းဖြင့် အခန်း၏ အပူချိန်ကို ထိန်းထား(Controlလုပ်ထား)ရမည်။ Air flow rate ကို နည်းအောင် များအောင် ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အခန်းအပူချိန်ကို control မလုပ်ရပါ။ အခန်းအတွင်းတွင် အပူချိန် မြင့်သည်နေရာ၊ အပူချိန်နိမ့်သည့်နေရာ မဖြစ်ပေါ်အောင် ပြုလုပ်ထား ရမည်။ အခန်းအတွင်းတွင် uniform temperature ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားရမည်။ အခန်းအတွင်း တစ်နေရာနှင့် တစ်နေရာ အပူချိန်ကွာဟချက် (Temperature gradient ) များပါက မလိုလားအပ်သည့် Air movement ကိုဖြစ် ပေါ်စေသည်။ အခန်းတစ်ခုလုံး Temperature Distribution သည် homogenous ဖြစ်နေသင့်သည်။ High contaminated area များတွင် air velocity သည် 0.2 m/s ထက် မကျော်သင့်ပေ။ လူနာများထားသည့် patient အခန်းများတွင် 0.1 m/s velocity သည်သင့်လျှော်သော velocity ဖြစ်သည်။ Air velocity ကို 0.45 ± 0.10 m/s တွင် ထိန်းထားခြင်းဖြင့် unidirectional lamina flow pattern ကို ရရှိနိုင်သည်။
Air Change per Hour (ACH) သည် contamination နေရာများအတွက် အလွန်အရေးပါသည်။ လူနာများ ထားသည့် patient room များအတွက် ထုံးစံအားဖြင့်2ACH –6ACH အတွင်း ဖြစ်သည်။ Critical room များ အတွက် 12 ACH အထိ ထားပေးသည်။ Surgical Operating theatre များအတွက် 15 ACH မှ 25 ACH အထိ ရှိနိုင်သည်။
Air Conditioning and Mechanical Ventilation - ACMV eBooks (မြန်မာဘာသာ)
Refrigeration (Vapor-compression cycle) အကြောင်း 0.5Mb
SI Unit and IP Units 2.1Mb
Chemical Water Treatment 0.5Mb
Chilled Water Plant 2.2Mb
Heat Balance on the Body 0.3Mb
Cooling Tower 1.5Mb
Air Handling Units and Cooling Coils 2.2Mb
Duct System 1.8Mb
Variable Air Volume System 1.0Mb
Chiller Plant Optimization Strategies 0.3Mb
င်္Fans and Blowers 1.2Mb
Can electrical power supply affect and cause to Fan Speed to lower and higher? That fan is either single phase or three phaze without VSD.
I would like to advice you. Do you know "R.P.M = 120 x frequency / number of pole " ? According to this formula , we can know frequency is important for without VSD fan. But if electrical power is too low, fan can't run because of E.M.F. If my advice is something wrong, please forgive me.